Features – Eleven Media Group
ဘ၀အရေးအတွက် ဆိုက်ကားနင်းဖြေရှင်းနေသူ အနှေးယာဉ်မယ်
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by ရွှေရအောင်
ဘ၀အရေးအတွက် ဆိုက်ကားနင်းဖြေရှင်းနေသူ အနှေးယာဉ်မယ် ဒေါ်ခင်မြင့်အား တွေ့ရစဉ်
မိသားစုတစ်စုအတွက် စားဝတ်နေရေး ပြေလည်မှုဟာ အဓိကကျတဲ့အပိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့် မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်ဆိုတဲ့အတိုင်း မောင်တစ်စီး မယ်တစ်စီးနဲ့ အနှေးယာဉ်ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ထွားကျိုင်းသန်မာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပိန်ပါးပါး အရပ်ကငါးပေအောက်နဲ့ အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးနှစ်ဦးမိခင် ဒေါ်ခင်မြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သုဝဏ္ဏမြို့နယ် (ဃ) ရပ်ကွက် မှာ နေထိုင်ပြီး ဆိုက်ကားနင်းလာတာက သုံးနှစ်ကျော် လေးနှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမျိုးသားဟာ ယခင်က အရက်အသောက်များတာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေသူတွေက အရက်ဖြတ်ဆေးတိုက်ဖို့ အကြံပေး လာရာကနေ သူမရဲ့ ခရီးကြမ်းစတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရက်ဖြတ်ဆေးတွေတိုက်တာကို တွေ့နေရပြီး အရက်ဖြတ်ဆေးတွေ တိုက်မိရာကနေ သူမရဲ့ အမျိုးသားဟာ ကျန်းမာရေး ချူချာလာပြီး ဆေးဖိုးဝါးခတွေနဲ့ အကြွေးတင်လာကာ အခြားအလုပ်တွေလည်း အဆင်မပြေသလို ဈေးရောင်းဖို့ ငွေအရင်းအနှီးလည်း မရှိတာကြောင့် ဆိုက်ကားနင်းဖြစ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘယ်လိုအကြွေးတင်လဲဆိုတော့ အရင်က ကိုယ့်ယောက်ျားက အရမ်းအရက်သောက်တာ။ အဲဒီတော့ သူများတွေက ဆေးတိုက်ဘာတိုက်ဆိုတော့ အရက်ဖြတ်ဆေး တိုက်လိုက်တာ၊ ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ တစ်နှစ်ကျော်လောက် တိုက်လိုက်တာ အလုပ် သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ ခြေတွေလက်တွေ မသယ်ချင်တော့ ပြန်ကောင်းလာပြန် ပြန်တိုက်ပြန်ဆိုတော့ ခြေထောက်တွေလက်တွေက မသယ်ချင်ပြန်ဆိုတော့ အကြွေးလေးဘာလေးယူပြီးတော့ သူ့ကိုကုဖြစ်တာ။ အရင်ကတော့ ပန်းရန်တွေဘာတွေ လုပ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက သူတို့ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အသားကုန်ခိုင်းတော့ အဲဒီအလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘဲ။ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်တာ” လို့ ဒေါ်ခင်မြင့်က ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သူမအနေနဲ့ အနည်းငယ် ထိတ်လန့်မှုရှိနေတယ်လို့ ဆိုမှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်နေသူတွေက အရက်ဖြတ်ဆေးတွေ တိုက်ဖို့တိုက်တွန်းတာကြောင့် အရက်ဖြတ်ဆေးတွေ တိုက်မိတာကို နောင်တရနေပုံလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါ်ခင်မြင့်ကို အရက်ဖြတ်ဆေးတွေတိုက်ဖို့ အကြံပေးတဲ့ အိမ်နီးနားက အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျား အရက်ဖြတ်ဆေးကြောင့် သေဆုံးသွားရတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုက်ကားနင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံကလည်း ယောက်ျားဖြစ်သူက အရက်တွေ သောက်တာကို မြင်တွေ့နေရပြီး နင်းဖို့ သင်ရင်းကျင့်ရင်းနဲ့ပဲ အိမ်နီးနားက အစ်မကြီးတစ်ဦးက ဘုရားလမ်းဈေးကို ခေါ်သွားရင်းကနေ ဆိုက်ကားနင်းဖြစ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်အနေနဲ့ ခုလိုဆိုက်ကားနင်းတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက မကြိုက်ပေမဲ့ အခြေအနေအရ ငွေရေးကြေးရေးအရ နင်းရတာဖြစ်ပြီး သူမဆိုက်ကားနင်းတာကြောင့် ရပ်ကွက်တွင်းကလူတွေက နင့်ယောက်ျား သေပြီဆိုကာ ပြောဆိုကြတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ခုလိုလုပ်ကိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုက်ကားနင်းရင်း ပြောပြလာပါတယ်။
“သူလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်း ကိုယ်လည်းကျန်းမာရေးမကောင်းသူလည်း မနင်းခိုင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့လည်း မဖြစ်လောက်ဘူး။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလည်းပါမှ သူများပိုက်ဆံတွေ ဆပ်လို့ရမှာဆိုပြီး နင်းတာ။ ပြောလည်း ပြောပါစေ။ ကိုယ်က သူများပေးဖို့ ပိုက်ဆံလောက်ပဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေဖို့လောက်ပဲဆိုပြီး နင်းတာ။ ပထမတော့ နင်ကဟယ် မနင်းပါနဲ့နင့်ယောက်ျား သေသွားပြီ ပြောကြတယ်။ ပြောလည်းပြောပါစေ။ ကိုယ့်ယောက်ျားကိုပြောတယ်။ နင့်ပိုက်ဆံနဲ့လည်း ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါလည်း လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့အဖြစ်ဟာ တကယ်တော့ ရင်နင့်ဖွယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရှိတဲ့ သားလေးနှစ်ယောက်ပဲ အသက်ရှင် တင်ရက်နေတာဖြစ်ပြီး ရှေ့ပိုင်းမှာ ကလေးသုံးယောက်လုံး ဆုံးပါးသွားရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်း ကြုံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ လက်ရှိနေအိမ်လေးဟာ အမွေပုံလို့လည်း သူမရဲ့ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ နှစ်ထပ်အိမ်လေးဖြစ်ပြီး အလျား ၁၀ ပေ အနံ ၂၀ ၀န်းကျင် အိမ်လေးဖြစ်ပြီး အိမ်ရဲ့အပေါ်ထပ်ကို အစ်မဖြစ်သူရဲ့ တူမတို့ မိသားစုနေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ ခြံတွေကို ဖဲ့ရောင်းခြမ်းရောင်းရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ခုလိုသာ ကျန်ခဲ့တာလို့လည်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဒေါ်ခင်မြင့်ဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီလုိ့ပြော နိုင်သလို ဆေးအရှိန်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်း နင်းချင်ရင်နင်း မနင်းချင်ရင်မနင်းနဲ့ အိမ်မှာပဲ ဆိုက်ကားဂိတ်ထိုးပြီး သက်သောင့်သက်သာ နေခိုင်းနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဆေးတွေတိုက်ဖန်များလို့ပဲ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာလားမသိဘူး တအားကျပ်တာ ညဘက်ဆို(ဂွိဂွိ)နဲ့ အသက်ရှူတွေကျပ်တာ အသက်မရှူနိုင်ဘူး။ အဲဒါဆေးခန်းလည်း မသွားနိုင်ဘူး။ အဲဒါလမ်းဘေးကဆေးဆိုင်မှာ ပါရာကဒ်ရယ်၊ အကြောပြေဆေးရယ်၊ ခေါင်းကြည်ဆေးရယ် ၀ယ်တိုက်တယ်။ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးဝယ်တိုက်တယ်။ ဒီလိုမျိုးပဲ ၀ယ်တိုက်တာပေါ့နော်။ နည်းနည်းလည်း ရင်ချောင်သွားရင် ပြီးဆိုပြီး ဒီလိုမျိုးပဲလိုက်တာ။ သူ့ကိုလည်း ဆိုက်ကားသွားနင်းလို့လည်း မပြောတော့ဘူး။ ဆိုက်ကားဂိတ်မှာလည်း မထိုးခိုင်းတော့ဘူး။ ဂိတ်မှာက ကျောင်းသားပို့ ဘာညာပြီးရင် ဆိုက်ကားတွေက ပုံနေတော့ သိတယ်မလား ဖဲရိုက်ဘာရိုက်နဲ့ ဆော့မိမှာ ကြောက်လို့။ အိမ်မှာ အိပ်ချင်အိပ် မအိပ်ချင်နေဆိုပြီး ဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာ ထားထားတာ”ဆိုပြီး ယောက်ျားသားအပေါ် စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပြောပြပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်တို့ မိသားစုအတွက် ၀င်ငွေအများရှာနိုင်သူဟာ ဒေါ်ခင်မြင့်လို့ဆိုရမှာပါ။ ကျန်းမာရေးချူရှာနေတဲ့ ယောက်ျားသားကို ပုံမှန်ဖောက်သည် ကျောင်းပို့ကျောင်းကြိုပြီးရင် အိမ်မှာ နေခိုင်းနေသူလို့ဆိုမှာပါ။ ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ (ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ ရပ်ကွက်အခေါ်) ဂျပန်ကြီးဟာ အနည်းငယ် ထိုင်းမှိုင်းနေသူလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး နေအိမ်မှာလည်း လျှပ်စစ်မီး မရှိတာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေမှာ သွားရောက်ပြီး အားသွင်းထားတဲ့ ဖုန်းလေးနဲ့ သီချင်းနားထောင် ဂိမ်းဆော့နဲ့ နားနေလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ အဓိကဖောက်သည်တွေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျောင်းပို့ကလေးတွေဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် ၆ နာရီတိုင်းမှာ ဒေါ်ခင်မြင့်ဟာ ပုံမှန်ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက် သင်္ကန်းကျွန်း စံပြဈေးမှာ ဈေးထွက်ပေးရတာဖြစ်ပြီး ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ရတာရယ် ပုံမှန်အမျိုးသမီးဖောက်သည်တွေကို လိုက်ပို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေတွေမှာမှသာ ပတ်ဝန်းကျင်က လိုအပ်ချက်အရ ကြားပေါက်လိုက်လေ့ရှိပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ အဓိက ဖောက်သည်မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်တို့အိမ်ရဲ့ တစ်နေ့ဝင်ငွေဟာ ကျပ်ငွေ ၄၀၀၀ ကနေ ၇၀၀၀ ကျော်ခန့်ထိရှိနိုင်ပြီး အဲဒီထဲကမှ ဆိုက်ကားအုံနာကြေးအဖြစ် နှစ်စီးအတွက် ၂၀၀၀ ထောင်ကျပ်၊ ဆိုက်ကား လျော်ကြေးအဖြစ် ကျပ်ငွေ ၁၀၀၀ အပါအ၀င် တခြားသော အကြွေးလေးတွေ ဆပ်ပြုရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သားလေးနှစ်ယောက်ထဲမှာ ၁၂ နှစ် သားလေးက ခြောက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ ၁၀ အရွယ်သားလေးက နှစ်တန်းကျောင်းသားအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှာ တက်နေကြတာဖြစ်ပြီး အကြွေးလာတောင်းတာတွေကို မြင်တွေ့လေ့ရှိတဲ့ သားတွေက ကျောင်းထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ ခွင့်တောင်းလေ့ရှိတာကြောင့် ပေးမလုပ်ခိုင်းဘူးလို့လည်း မိခင်တစ်ဦးရဲ့မေတ္တာနဲ့ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာပါတယ်။
“အကြီးကောင်ကတော့ ဒီနှစ်ကျောင်းပိတ်လို့ရှိရင် အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ပြန်မထွက်တော့ဘူး။ ကျောင်းထွက်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ခုကျူရှင်တောင်မထားနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်က တစ်လကို ၁၅၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀ မရှာနိုင်တော့ဘူး။ ကျူရှင်တောင် အခမဲ့သင်တဲ့ကျူရှင်ကို ည ၆ နာရီလောက်ဆို သွားသွားခိုင်းထားတာ။ အကြွေးရှိတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုရှိတယ် ဘာညာဆိုတာ ကိုယ့်ကလေးတွေကို မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက အကြွေးလာလာတောင်းတော့ ကလေးတွေက ကျောင်းထွက်မယ် အလုပ်လုပ်မယ်နဲ့ ပြောတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပေးမလုပ်ခိုင်ဘူး” ဟု ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ ညီမတွေထဲမှာလည်း ခုလိုပဲ ကျောင်းထွက်ပြီး ကားရေဆေးဆိုင်မှာ လုပ်ကိုင်နေတာကိုသိနေတဲ့ သားလေးက ခုလိုခွင့်တောင်းတာလို့လည်း ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သားတွေကို လက်ရှိဘ၀ထဲကနေ ရုန်းကန်ကယ်တင်ချင်သူလို့ ဆိုရမှာပါ။
အနှေးယာဉ်မယ်ဒေါ်ခင်မြင့်တို့ မိသားစုရဲ့ မိသားစု စုံလင်ချိန်ဟာ ညပိုင်းချိန်လို့ဆို ရမှာပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးတွေမှာသာ သားတွေကျောင်းပိတ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်လေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး ကျန် တဲ့နေ့မျိုးတွေမှာတော့ဖြစ်သလို ဆိုင်ကပါ ဆယ်လေးတွေဝယ်ပြီး စားလေ့ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မြင့်ဟာ လက်ရှိမှာ နေအိမ်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ၀င်ငွေရှာဖွေနေသူ တစ်ဦးဖြစ်သလို နေအိမ်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ဆိုလည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သားသမီးတွေကို ရုန်းကန်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လင်ယောက်ျားအပေါ်မှာလည်း တာဝန်ကျေပွန်သူတစ်ဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လှောင်ပြောင်သံတွေကိုပါ ခေါင်းကော့ရင်မော့ရင်း ၀မ်းတစ်ထွာအတွက် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ရုန်းကန်နေသူလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒေါ်ခင်မြင့်ရဲ့အလုပ်နားချိန်ဟာ ညနေ ၆ နာရီကျော် ၇ နာရီဝန်းကျင်မှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက်ကြောင့််သာ လူအများရဲ့ ပြောဆိုသံတွေကို နားမပါသလို မကြားယောင်ဆောင်ပြီး ယောက်ျားသားတွေနဲ့တန်းတူ ရင်ပေါင်တန်းရင်း ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ အလုပ်ကိုရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သူမကို ရပ်ကွက်တွင်း နေထိုင်သူတွေက ဒေါ်ခင်မြင့်ကို အနှေးယာဉ်မယ်တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံထားကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်တွင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ကလေးမိဘတွေကလည်း ဒေါ်ခင်မြင့်နဲ့ဆို ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို စိတ်ချရတာရယ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ အခြေအနေအရ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ လူထဲကလူပဲဖြစ်တာကြောင့် မျှော်လင့်ချက်တွေ မျှော်မှန်းချက်တွေရှိနေမှာပါ။ စားဝတ်နေရေးအကျပ်အတည်း၊ မိသားစုကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းတွေကြားမှာ ရုန်းကန်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်မြင့်အတွက် ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒများစွာလည်း ရှိနိုင်သလို ရှိလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လတ်တလော သူအဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုကတော့ အကြွေးလေးတွေကို ကျေပွန်အောင်ဆပ်နိုင်ဖို့ရယ် ပင်ပန်းလှတဲ့ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့အလုပ် (အနှေးယာဉ်မယ်) ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in Features, HeadlineTagged ဆိုက်ကား, အနှေးယာဉ်မယ်LeaveaComment on ဘ၀အရေးအတွက် ဆိုက်ကားနင်းဖြေရှင်းနေသူ အနှေးယာဉ်မယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ဆို့မှုများကို အဖြေရှာရမည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by ဆန်းမိုးထွန်း
NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များအား တွေ့ရစဉ်
လာမည့် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များပါဝင်သည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ထိုနေ့သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) ရေးထိုးခြင်း သုံးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်း ဖြစ်သည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အစိုးရဘက်မှ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော်ဘက်မှ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် NCA လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားထားသည်။
ယခု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ အတွင်း နောက်ထပ်ပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေးသုံးကြိမ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးကြီးသော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူများရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရာ၌ အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအိမ်တော်တွင် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က ကျင်းပသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ မတွေ့ဆုံမီ အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ကြိုတင်တွေ့ဆုံ မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ညှိနှိုင်းမှုကို ခေါင်းဆောင်များ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ယင်းထိပ်သီးအစည်း အဝေးတွင် NCA လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း မရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသည် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမ ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ကြောင်း NCA လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ဆိုသည်။
“အခုတစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကတော့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အကြား တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေ ကြားမှာလုပ်တဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲလို့တောင် ပြောလို့ရပါ တယ်” ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(PNLO) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
■ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၏ မြစ်ဖျားခံရာသည် နေပြည်တော်၌ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပနေသည့် အချိန်ကာလတွင် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည့် အချက် ငါးချက်ကို NCA-s EAO ဘက်က တင်ပြခဲ့သည်။
NCA-s EAO ဘက်က တင်ပြခဲ့သည့် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအကြား အရေးတကြီးဆွေးနွေးရန် လိုအပ်နေသော အချက်ငါးချက်မှာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေးများကို ဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ရေး ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အမျိုးသားတန်းတူရေး လူမျိုးစုအခွင့်အရေး ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းမှုစသော ဖက်ဒရယ်မူများ ချမှတ်နိုင်ရေးကိစ္စ၊ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုင်ရာကိစ္စ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ချမှန်နိုင်မည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ပုံစံများရှာဖွေရေးကိစ္စ၊ အလုပ်အဖွဲ့များ၊ ကော်မတီများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် မပြီးပြတ်သည့် ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအကြား ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးကိစ္စနှင့် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ကျန်ရှိနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိစ္စများပင်ဖြစ်သည်။
NCA-s EAO ဘက်က တင်ပြမှုအပေါ် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က တွေ့ဆုံရန် အချိန်ကျပြီဟု ယူဆလာ သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားထားသည်။
ပြီးစီးခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေးသုံးကြိမ်တွင် အစိုးရနှင့် NCA-s EAO တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သဘောတူညီချက် ၅၁ ချက် ရရှိခဲ့သော်လည်း အရေးကြီးသည့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူများမှာ ပါဝင်လာခြင်း မရှိသည့်အပေါ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေသည်။
၂၀၁၇ မေလကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ပြည်နယ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲပိုင်ခွင့်စသော ခွဲမထွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားများအကြား သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ယင်းအချက်များကို ယခုနှစ် ဇူလိုင်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တတိယအကြိမ် ညီလာခံ၌ ဆက် လက်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
“တစ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို တစ်ဆို့မှုတွေကို မဖြေရှင်းရင်တော့ ရှေ့ကို သွားမယ့် ခရီးလမ်းမှာ အထစ်အငေါ့တွေ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ EAO ဘက်က မြင်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်မိုလို့ အစိုးရနဲ့ EAO ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ တွေ့ဖို့လိုတယ် ဆိုပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေ ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားမှုတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစိုးရဘက်က ပြန်ပြီး EAO ကို ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်ဆို့နေတဲ့ အချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့က အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ ရှိရင် ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ ပါ တယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို ဘယ်လောက်အထိ တိုင်းရင်းသားတွေက လိုချင် နေတာလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်း သေချာဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုပဲ အစိုးရဘက်ကလည်း တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ လိုလားချက်အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ ပေးနိုင်မလဲ။ ဥပမာ တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ထား ရှိရေးကိစ္စ။ အဲဒါက ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ထားရှိရေးဆိုတာက မူအရရှိတယ်။ အဲဒါကို သိပ်ပြီးတော့ အငြင်းပွားနေစရာ မလိုဘူး။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်တွေကို ဘယ်လို နေရာချထား မလဲဆိုတာ စဉ်စားဖို့အချက်တွေ လိုလာတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဘယ်လို ခိုင်မာအောင် လုပ်မလဲ။ ကြားကာလ အစီအစဉ်တွေကို ဘယ်လို စီစဉ်ဆောင်ရွက်မလဲ။ အားလုံးမပြီးသေး တဲ့ ကာလမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ကိုယ့်နယ်မြေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့က လိုတယ်။ အဲဒီတော့ ကိစ္စတွေက တော်တော်များများရှိပါတယ်” ဟု ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက ဆိုသည်။
NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအစည်း အဝေးကို သုံးကြိမ်အထိ ကျင်းပပြီးသော်လည်း ပြည်နယ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်၊ ခွဲမထွက်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း ခွင့်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများသည် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အကြားတွင် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရန် တစ်ဆို့နေခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ၂၀၁၈ ခုနစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနစ်အတွင်း နှစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း သုံးကြိမ်ကျင်းပရန် ရည်မှန်းထားပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူများကို ချမှတ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များကလည်း နောင်တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံများတွင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ၎င်းတို့အကြား တစ်ဆို့နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်နိုင်ရန် လိုလားလျက်ရှိသည်။
“ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူထားတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဆွေးနွေးရမယ့်မူတွေပဲ ချမယ်ထင်တယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ မရနိုင်ဘူး။ အသေးစိတ်ကို အောက်ခြေက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေ ဖွဲ့ပြီး တော့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ့် အနေအထားရှိတယ်။ ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့တော့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်တယ်။ ၂၀၁၉ အထိတော့ ပြတ်ဖို့က နည်းနည်းခက်မယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ EAO က အဖွဲ့ ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ NCA အ၀န်း အ၀ိုင်းထဲ မ၀င်လာသေးတဲ့ တခြားညီနောင်အဖွဲ့တွေလည်း ရှိနေတယ်။ သဘောက ကျွန်တော်တို့ ၁၀ ဖွဲ့တည်း ရဲ့ သဘောထားနဲ့ သွားလို့မရဘူး။ ကျန်တဲ့ ညီနောင်တွေရဲ့ သဘောထားလည်း ပါဖို့လိုတယ်။ အဲဒါက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါတယ်။ အဲဒါလည်း NCA အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲကို မလာနိုင်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီနောင်အဖွဲ့ တွေ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်းက ဆိုသည်။
■ ပုပ္ပားမှ နေပြည်တော်သို့
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မှုရရှိရေး ဆွေးနွေးမည့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော်နှင့် NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပုပ္ပားဒေသ၌ ငါးရက်ကြာကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်သည် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သုံးနှစ်ပြည့်ချိန်ဖြစ်၍ အနှစ်သာရရှိသည့် ပုံစံဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ပုပ္ပားထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးပွဲသို့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့စလုံးမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ပေးရန် ဆွေးနွေးထားကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ဆိုသည်။
အစိုးရဘက်က ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို NCA လက်မှတ်ထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့စလုံးမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ပေးရန် ဆွေးနွေးထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) တို့က အစိုးရ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်တွင် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် မသေချာသည့်အနေအထားတွင် ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် NCA စာချုပ်၌ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည့် RCSS သည် တပ်မတော်နှင့် တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲများကြောင့် နှစ်ဖက်အကြား အငြင်းပွားမှုများရှိခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရေးအတွက် အောက်ခြေအဆင့်တပ်များ တွေ့ဆုံရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-U) က ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ရှမ်းပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးကော်မတီ (JMC-S) သည် NCA စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း RCSS က အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများအား ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီး JMC- S တွင် သမာသမတ်ကျခြင်း၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုမရှိပါက ရှေ့ဆက် ကျင်းပမည့်JMC-U အစည်းအဝေး များတွင် တက်ရောက်ရေးကို ပြန်လည် စဉ်းစားမည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး (KNU) ကလည်း အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်တွင် ဗဟို အမြဲ တမ်းကော်မတီအစည်းအဝေး ပြုလုပ်၍ ကြေညာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကြေညာချက်ထဲတွင် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်းနှင့် ရလဒ်ကောင်းများရရှိရေး ပြင်ဆင်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နေသေး၍ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မည့်ရက်ကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုကြောင်း ပါရှိသည်။
တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ကို လက်ခံရန် တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စ၊ ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ရေးကိစ္စ၊ NCA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် NCA အပေါ် မတူညီသည့် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များကိစ္စတို့ အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အချိန်လိုအပ်နေသေးသည်ဟု KNU က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အဓိကကတော့ လူကြီးတွေရဲ့ ပြင်ဆင်မှုကို ကောင်းကောင်းလိုအပ်တယ်လေ။နောက်ပြီးတော့ တစ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာလည်း နှစ်ဖက်အယူအဆ ကွာဟနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေ့ါနော်။ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုနေသေးတယ်။ ဆိုတော့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းမှုတွေတော့ ရှိမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကတော့ (ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်မယ့်ရက်ကို) PPST မှာပဲ ပြန်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းမှာပါ။ ဘယ်ရက်က အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကတော့ လူကြီးတွေရဲ့ ပြင်ဆင်မှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်}}ဟု KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောတာဒိုမူးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို အားလုံးပါဝင်မှုဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ရန် NCA မထိုးရသေးသောအဖွဲ့များအား ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လာနိုင်မည့် အခင်းအကျင်းများ ဖန်တီးပေးရမည်ဟု KNU က ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတအိမ်တော်တွင် အောက်တိုဘာ ၅ ရက် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးဇော်ဌေးက “ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခါမှ မရှိဖူးဘူး။ မရှိတဲ့အတွက် တကယ့်နိုင်ငံရေး စိတ်ရင်းစေတနာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံရေး စိတ်ရင်းစေတနာ ဘယ်လောက်ရှိ လဲ၊ မရှိလဲဆိုတာ ဒီပွဲကို တက်ခြင်း၊ မတက်ခြင်းက အရေးကြီးတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးပွဲ မတက်သည့် ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အဘယ်ကြောင့် မတက်ရောက်နိုင်သည်ကို ပြည်သူအား အကြောင်းပြချက်ပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“တက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဆို့နေတာတွေ ပျောက်မယ်။ မတက်ဘဲနဲ့ ရှောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပျောက်ဖို့ခက်တယ်။ ခက်တယ်ဆိုတော့ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသလား၊ မလိုလားဘူးလား ဆိုတာ ကတော့ ဒီအစည်းအဝေး တက်ခြင်း၊ မတက်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲရက်ရွှေ့ဆိုင်းရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့က လိုလားခဲ့သော်လည်း အစိုးရကမူ သတ်မှတ်ထားသည့် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်သာ ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပုပ္ပားဒေသတွင် ပြုလုပ်ရန် လျာထားသည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ကို အစိုးရအဆိုပြုထားသည့် ရက်အတိုင်း တက်ရောက်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် ပုပ္ပားဒေသတွင်ပြုလုပ်မည့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်ဟု ပါရှိသည်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော တစ်ဆို့မှုများအား ကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအကြား အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲမှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေး အဖြေရှာသွားနိုင်ရန် ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပရန် PPST အစည်းအဝေးက သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အစိုးရဘက်ကတော့ ပြင်ဆင်မှုကတော့ ပုပ္ပားလို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က စဉ်းစားချက်က ဘာလဲဆိုရင် ပုပ္ပားထက်စာရင် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလည်း ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုးက ရန်ကုန်မြို့က ပိုပြီးသင့်တော်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ထပ်ပြီး အဆိုပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး ဆက်လက်ပြီးတော့ ညှိတဲ့အခါမှာတော့ နေပြည်တော်ဟာ ပိုပြီးတော့ အစိုးရရော၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရော လက်လှမ်းမီနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် နေရာက ဘာလဲဆိုရင် နေပြည်တော်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲက ဆိုသည်။
NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ်
■ ဘာတွေ မျှော်လင့်နေကြသလဲ
အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တစ်ဆို့နေသည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်မည်ဟု NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက မျှော်လင့်နေသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အမြင့်ဆုံး ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ၌ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်သည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တစ်ဆို့နေမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ပအိုဝ်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PNLO) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက ဆိုသည်။
“ဒီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားမှာပဲ ဆွေးနွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ ဆွေးနွေးကြမယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဆွေးနွေးမှုမျိုးကို ဒီတစ်ပွဲတည်းတင် မကဘူး။ နောက်ဒီလိုပွဲတွေကို ကျွန်တော်တို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်သွားခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာလည်း ပိုပြီးတော့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း ပိုပြီးတော့ အ ထောက်အကူပြုမယ်။ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ မူတွေလည်း ရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက ပြော ကြားသည်။
သို့သော် ယင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုသာ ချမှနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရရှိ လာသည့်မူများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်မျိုးဝင်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
“ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အဆင့်က နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုလောက်ပဲ ချပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်မူတွေ ဆွေးနွေးမယ့် အနေအထားမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီထိပ်သီးကနေ ချပေးလိုက်တဲ့ မူတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ UPDJC အနေနဲ့ အဆင့်ဆင့် အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ပြီး ဖော်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို မူတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ ဒီထိပ်သီးအစည်း အဝေးက လမ်းညွှန်မှုပဲ ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ရဲဘော်မျိုးဝင်းက ဆိုသည်။
ယခုပြုလုပ်မည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပုံစံကို ဒီဇိုင်းပြောင်းရန် စတင်လှမ်းလိုက်သည့် ခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်းက ဆိုသည်။
“ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပုံစံကို ဒီဇိုင်းပြောင်းဖို့ ခြေလှမ်းအစဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အခုက ထိပ်သီးတွေကနေတစ်ဆင့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မူဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ရလာမယ်။ အဲဒီရလာတဲ့ဟာကို လူထုကို ပြန်ချပြမဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင် မူဘောင်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မဲ့ အစည်းအဝေးတွေရှိမယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာက သီးသန့်ထွက်လာ မယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေး တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တစ်ဆို့နေသည့်ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ရန် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များက မျှော်လင့်နေ သကဲ့သို့ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များကလည်း ထောက်ခံမှု ရှိခဲ့သည်။
‘၀’ အဖွဲ့ ဦးဆောင်သော မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟု လူသိများသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (FPNCC) ကလည်း အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်မည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို FPNCC အနေဖြင့် ထောက်ခံပြီး ယင်းဆွေးနွေးပွဲမှ အပြုသဘောဆောင်သည့် ရလဒ်များရရှိရန် မျှော်လင့်သည်ဟု FPNCC က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဦး တည်ချက်များကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ပါက FPNCC အနေဖြင့် NCA အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် မည်သည့်လမ်းကြောင်းမျိုးကိုမဆို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှအား အစဉ်အမြဲထောက်ခံကြောင်းနှင့် FPNCC အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ညှိနှိုင်းကျင်းပဆွေးနွေးရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ စတင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ကြားတွင် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့် အရိပ်အယောင်များကို တွေ့မြင်နေရသည်။
နေပြည်တော်တွင် ငါးရက်တာ ကျင်းပမည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တစ်ဆို့နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ခေါင်းဆောင်များက ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အဖြေရှာနိုင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစိုးရ မျှော်မှန်းထားသည့် ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် အခြေခံမူများကို ချမှတ်မည့် မျှော်မှန်းချက်သည် ပြည့်ဝမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ယုံ ကြည်မှုကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြတ်နိုင်မည့် အနေအထားမျိုးတွင် ရှိနေသည်။
ထို့ကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ တစ်ဆို့နေသည့် ကိစ္စရပ်များအား မည်မျှအထိ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မည်ဆိုသည့်အပေါ် ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အမြင်ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးကသာ စေတနာမှန်ရင် ၂၀၁၉ မှာ ရနိုင်တယ်။ စေတနာမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်။ တကယ့်ကို ရနိုင်လောက်တဲ့အနေအထား ရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ ပွင့်လင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကလည်း ဘာလိုသလဲ။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်မလဲ။ တပ်မတော်ဘက်ကရော၊ အစိုးရဘက်ကရော တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ နားလည်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးကို နှစ်ဖက်စလုံးက အပေးအယူလုပ်ရမှာပေါ့။ Win Win ပေါ်လစီကို ကျွန်မတို့ ကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက သာတူညီမျှအရေးကို လုပ်ရ မှာဖြစ်တယ်” ဟု ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဒေါ်စောမြရာ ဇာလင်းက ဆိုသည်။
Posted in Features, HeadlineTagged NCALeaveaComment on ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ဆို့မှုများကို အဖြေရှာရမည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
တရုတ်အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ကံကြမ္မာ
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by ■ အောင်မျိုးသူ
တရုတ်အရှေ့ပိုင်း ရှန်တုံပြည်နယ် ကျင်းတောင်ဆိပ်ကမ်းကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်က ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ (Photo – AFP)
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ပင်းနှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့အကြား လာမည့်လတွင် တွေ့ဆုံရန် တံခါးပွင့်လာသောကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံး နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ တင်းမာမှုအလားအလာများ လျော့ကျနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ချက်များ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် သွင်းကုန်များကို စည်းကြပ်ခွန်များ ပြဋ္ဌာန်းမှုကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ကို စိုးရိမ်မှုများ ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ စည်းကြပ်ခွန်များ မြင့်မားလာမှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံစလုံး ရှိ ကုမ္ပဏီများအတွက် စရိတ်များ မြင့်တက်စေခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေသည် အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဆိုလျှင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေးထားသည်။
ရှီနှင့် ထရန့်တို့ ထိပ်သီးအကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့လျှင် နိုဝင်ဘာနှောင်းပိုင်း၌ အာဂျင်တီးနားရှိ ဂျီ-၂၀ ထိပ်သီးတွင် တွေ့ဆုံကြဖွယ်ရှိသည်။
“အစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလို့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး” ဟု အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး စတိဗ်နူချင်က ဘာလီတွင် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ထရန့်၏ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်သော လယ်ရီကက်လိုကလည်း ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေဆဲသာဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ၀ါရှင်တန်၌ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗျူနိုအေရိစ်တွင် ဂျီ-၂၀ ဘေးဆွယ်အစည်းအဝေး၌ ရှီ- ထရန့် အစည်းအဝေးဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ထိုအတွက် အမေရိကန်က စဉ်းစားနေပြီး တရုတ်ကလည်း စဉ်းစားနေကြောင်း ရာနှုန်းပြည့်သေချာပြီဟု မပြောနိုင်ကြောင်း ကက်လိုက CNBC နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီကျင်ပင်းသည် မိတ်ဆွေတစ်ဦးဟု သက်တမ်းအစောပိုင်းတွင် ပြောကြားထားခဲ့ဖူးသည့် ထရန့်က အမေရိကန်၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရန် ဈေးချိုသော သွင်းကုန်များစီးဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ပြောကြားထားသောကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး သည် ထရန့်၏ အာရုံအ၀င်စားဆုံးကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့သည် တရုတ်ကို ဘက်ပေါင်းစုံ၌ ဖိအားတိုးမြှင့်ထားပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀ ကျော်က သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း တရုတ်နှင့်အမေရိကန်ကြား မကြုံစဖူးသော မဟာဗျူဟာတစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်။
ထရန့်သည် မကြာသေးခင် သီတင်းပတ်များအတွင်း တရုတ်ကို ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိသော သွင်းကုန်များအတွက် စည်းကြပ်ခွန်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်၏ ရန်ဘက်ထိုင်ဝမ်ကိုလည်း စစ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရွေးကောက် ပွဲများ၌ တရုတ်က ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပြီး တရုတ်၏ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများကို ရှုတ်ချမှုများ အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ နျူကလီးယားနည်းပညာကို တရုတ်က ရရှိနိုင်ခွင့်ကိုလည်း ထရန့်က ကန့်သတ်ခဲ့သည်။
Council on Foreign Relations မှ အာရှရေးရာ ဒါရိုက်တာ အလီဇဘတ်က “တရုတ်ကို အမေရိကန်က မျက်နှာသာပေါင်းစုံကနေ ထိုးနှက်နေပါတယ်။ တရုတ်က အရမ်းကြီးထွားလာနေပြီလို့ ၀ါရှင်တန်က ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံထားပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစံတွေကို ချိုးဖောက်နေတာတွေ ဆက်လက်ခွင့်ပြုဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် တရုတ်က အင်အားကြီးလာနေတယ်လို့ ၀ါရှင်တန်က လက်ခံထားပါတယ်” ဟု သူက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများ မျှော်လင့်ထားသည့် အခြေအနေနှင့် တရုတ်မဟုတ်တော့ကြောင်း သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးသည် နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမှု၏ အပေါ်ယံအကြောင်းရင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပေကျင်းရှိ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံး သပ်သူဟွာပိုက သဘောတူလက်ခံထားသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ အများစုကို ပြည်တွင်းမှသာ ရင်းမြစ်များရယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပေကျင်းက ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ထားပြီး Made in China 2025 စီမံချက်သည် အမေရိကန်က စိုးရိမ်နေသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း ဟွာပိုက ယုံကြည်နေသည်။
တရုတ်သည် နည်းပညာများ ခိုးယူနေပြီး နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဖိအားပေးခြင်းဖြင့် မမျှတသော ကုန်သွယ်ရေး အသာစီးရယူမှုကို ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း အမေရိကန်က စွပ်စွဲထားသည်။
တရုတ်ဈေးကွက်ကို ၀င်ရောက်ခွင့်ရရန်အတွက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက နည်းပညာများ လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ရန် လိုအပ်မှုမရှိသောပို၍ ဟန်ချက်မျှတသည့် ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှု တစ်ခုရရှိရန် ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့က လိုလားနေသည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး နူချင်က အကြိမ်ကြိမ်ပြောကြားထားသည်။ တရုတ်သည် ငွေကြေးကို ဈေးကစားနေသည်ဟု သတ်မှတ်ကြေညာရန် နူချင်က အကြံပြုထားကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ထားပြီး အမေရိကန်က ယင်းကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့လျှင် အပြစ်ပေးအရေးယူမှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။
“တကယ်လို့ ကုန်သွယ်ရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းပြီးရင်တောင် အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်ကြားက အခြားပြဿနာတွေကတော့ ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပါ” ဟု ဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထရန့်သည် စစ်အေးသစ်တစ်ခုကို တိုက်ခိုက်လိုနေကြောင်း ဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်သည် မဟာမိတ်တို့၏ ထောက်ခံမှုကို အထူးသဖြင့် ဥရောပမှ ထောက်ခံမှုကို ရယူနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ သူက သံသယရှိနေသည်။ ဥရောပက တရုတ်သည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုဟု ရှုမြင်မထားပေ။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက် ကမောက်ကမဖြစ်နေချိန်တွင် ထရန့်၏ အခွန်လျှော့ချမှုများကြောင့် အဆိုးသက်ရောက်မှု များရှိလာပြီး အမေရိကန်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်လာနိုင်သည်ဟု တရုတ်က မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုသည် အချိန်ကာ လအတိုင်းအတာတစ်ခုသာ ကြာမြင့်မည်ဟု တရုတ်က ယုံကြည်ထားကြောင်း အမေရိကန်သည် တရုတ်နှင့် မီတာ ၁၀၀ အပြေးပြိုင်လိုနေကြောင်း သို့သော်လည်း တရုတ်က အမေရိကန်နှင့် မာရသွန်ပြေးလိုကြောင်း ဟွာက ဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်း တရုတ်ငွေကြေးသည် ဒေါ်လာနှင့်လဲလှယ်ရာတွင် ဈေးကျနေခဲ့ပြီး တရုတ်အစိုးရသည် အမေရိကန်ထုတ်ကုန်များနှင့် တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ယွမ်ငွေတန်ဖိုးကို ဈေးလျှော့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေသည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုသီတင်းပတ်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်ကို ငွေကြေးဈေးကစားသူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း ရှိ ၊မရှိကို နူချင်က ဘာလီတွင် မပြောကြားခဲ့ပေ။
ယခင်က အမေရိကန်သည် တရုတ်ကို စောင့်ကြည့်စာရင်းတွင်သာ ထည့်သွင်းထားပြီး တရုတ်သည် ငွေကြေးဈေးကစားသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဖူးသည်။ ယွမ်ငွေတန်ဖိုး အားပျော့နေခြင်းအတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်း တရုတ်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ယွီကန်နှင့် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း နူချင်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်၏ ငွေချေးစာချုပ်များကို အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်နေသော တရုတ်သည် ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုတွင် အမေရိကန်ကို ဖိအားပေးရန်အတွက် လက်ဝယ်တွင်ရှိသော အမေရိကန်ငွေချေးစာချုပ်များကို လျှော့ဈေးနှင့် ရောင်းဖွယ်ရှိကြောင်း စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်ငွေချေးစာချုပ်များကို လျှော့ဈေးနှင့် ထုတ်ရောင်းခြင်းသည် တရုတ်အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအလားအလာကို မစိုးရိမ်ဟု နူချင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်သည် အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ယမန်တစ်နှစ်ကထက် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလတွင် ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြမှုသည် ဒေါ်လာ ၃၄.၁ ဘီလျံအထိ ရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်က စည်းကြပ်ခွန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်တို့ အားပျော့သွားမည်ဆိုသော ခန့်မှန်းချက်များကို ပေကျင်း၏ ပို့ကုန်များက အာခံပြနေကြသည်။
တရုတ်သည် သြဂုတ်လကလည်း ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြမှု စံချိန်တင်ထားခဲ့သည်။ အမေရိကန်က စည်းကြပ်ခွန်မတိုးမြှင့်မီ ကုန်အမှာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် တရုတ်ပို့ကုန်များ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏ ၀ယ်လိုအား ခိုင်မာနေပြီး တရုတ်ယွမ်ငွေတန်ဖိုး အားပျော့နေမှုကြောင့် တရုတ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ ဈေးချိုနေခဲ့ကာ အမြတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Oxford Economics မှ လူးဝစ်ကူအစ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်ယွမ်ငွေသည် ယခုနှစ်အတွင်းတွင် ဒေါ်လာနှင့်လဲလှယ်ရာ ၌ တန်ဖိုး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကျဆင်းခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်သည် ပို့ကုန်တင်ပို့သူများကို ကူညီရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို လျှော့ချထားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းချက်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အရင်းအနှီးများ စီးထွက်ခြင်းကို အားပေးခြင်းဖြင့် တရုတ်စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ယွမ်ငွေတန်ဖိုး ထပ်မံကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်တရုတ် ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေကုန်သွယ်မှုများကို တင်းကျပ်နေသည်။
Posted in Features, HeadlineTagged တရုတ်အမေရိကန်LeaveaComment on တရုတ်အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ကံကြမ္မာ
အစိုးရ လက်ကျန်သက်တမ်း တစ်ဝက်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာ ဘယ်လိုရှိလာမလဲ
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by Eleven Media Group
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသူအချို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက တွေ့ရစဉ် (ရှိုင်းလင်းအောင်)
NLD အစိုးရသစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်ကဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာ အစိုးရသက်တမ်းတစ်ဝက် ကာလကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းတစ်ဝက် ကာလအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ တိုးတက်လာသလား၊ ကျဆင်းတဲ့ဘက်မှာ ရှိနေသလားဆိုတာ သုံးသပ်ပြီး ကျန်နေတဲ့ သက်တမ်းတစ်ဝက်မှာ စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွက် အလားအလာကောင်းတွေကို ဘယ်လိုဖော်ဆောင် ပေးမလဲဆိုတာ လုပ်ငန်းရှင်တွေရော ပြည်သူများကပါ စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
အစိုးရဘက် တာဝန်ရှိသူတွေ ဆီကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေး တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုသံတွေ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေက စီးပွားရေး လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲနေပြီး ပြိုလဲမသွားအောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတယ်လို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း မြန်မာ့စီးပွားရေး အနာဂတ်အတွက် မှန်းဆရခက်ပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်နေဆဲလို့ ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ အလုပ်သမားထု၊ မိသားစုများနဲ့ ပြည်သူအများစုကတော့ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းအောက် ရောက်နေကြပြီး ၀င်ငွေထွက်ငွေ မမျှတမှုနဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေက ပိုပြီးကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာများကပြောတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေမှာ အဆိုးရွားဆုံး ကျဆင်းနေတယ်လို့ Myanmar Business Sentiment Survey အတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အများစုက ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ သြဂုတ် ၂၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ B2B Insights Forum မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ စာတမ်းအရ သိရပါတယ်။ အဆို ပါစစ်တမ်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ စစ်တမ်းအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့်၂၀၁၇ ခုနှစ်တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန ရလဒ်များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေး အဆိုးရွားဆုံး ကျဆင်းလျက် ရှိနေတာကို တွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်မှ စတင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ငွေကြေး (ကျပ်) သည် အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“စစ်တမ်းအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ မကောင်းဘူး။ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်ပဲ ကောင်းနိုင်တယ်။ ဒါကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောပေးပါ။ မြန်မာကျပ်ငွေဟာ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာ ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု အဆိုပါ စစ်တမ်းအား တင်ပြခဲ့တဲ့ MMRD Co.,Ltd မှ Chairman ဦးမိုးကျော်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ လာမယ့်သုံးနှစ်အတွင်း လျော့ကျနေမယ်လို့ အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီလိုခန့်မှန်းမှုကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် သုံးနှစ်တာအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်း လျော့ကျနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်း လျော့ကျမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနည်းတူ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံများလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားပြီး ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်က အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံများရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းအား ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ယင်းခန့်မှန်းချက်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်နဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာတွင် ခန့်မှန်းထားချက် ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းလာကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ရှေ့တွင်လည်း မရေရာမှုများနဲ့ ပိုမိုရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အဓိက အချက်မှာ ကုန်သွယ်ရေး တင်းမာမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ အတိုးနှုန်း မြင့်မားလာခြင်း၊ ဒေါ်လာအားကောင်းလာခြင်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်အများစုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက် မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်အများစုက ၎င်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းမသွားဖို့ကိုပဲ အဓိကထား အာရုံစိုက် နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ ၀န်ထမ်းလျှော့ချတာတွေ ပြုလုပ်နေရပြီး တချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ ၀န်ထမ်းမလျှော့သော်လည်း ၀န်ထမ်းများရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်ပေမယ့် လစာတိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက် မျက်နှာပူနေရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
“အကျပ်အတည်းက အခုမှ မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကတည်းက ဖြစ်နေတာ၊ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ” ဟု ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“လက်ရှိဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ သီအိုရီပိုင်းတော့ အရမ်းမှန်တယ်၊ လက်တွေ့ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေက အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ လှုပ်လှုပ်လေး ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာထပြီး ပေါက်ကွဲလာမလဲ မသိဘူး။ အခုစီးပွားရေး သမားတွေ ညည်းနေကြပြီ။ စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လူသောင်းချီရှိကြတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ရပ်သွားရင် ဒီလူတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ စီးပွားရေးသမားဆိုတာ အမြတ်အစွန်းရဖို့လုပ်တာ မှန်ပေမဲ့လည်း သူအကြောက်ဆုံးက အလုပ်ရပ်တာ အကြောက်ဆုံးပဲ။ ရှုံးတာမြတ်တာကို မကြောက်ဘူး။ အလုပ်ရပ်တာကို ကြောက်တယ်” ဟု ဦးအေးသောင်းက ဆိုပါတယ်။
“အဓိက,က ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တယ်။ ၀င်ငွေက တိုးမလာဘူး။ အဘက်ဘက်က ကုန်ကျစရိတ် တက်နေတယ်။ ၀င်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မမျှတော့ဘူး။ မိသားစု လူကုန်အလုပ်လုပ်နေလို့ ထမင်းနပ်မှန်တာ” ဟု တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းသို့သော အခြေအနေတွေကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် လူတိုင်းမျှော်လင့် နေကြပါတယ်။ သူဌေးတွေက မျှော်လင့်နေသလို ပညာရှင်တွေ၊ ပြည်သူအားလုံးကလည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီကြားထဲကပဲ လုပ်ငန်းအများစု ပြိုကျသွားမလား စိုးရိမ်နေပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဆေးမြီးတိုလေးနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာ လုပ်ငန်းတွေက ICU အထဲရောက်နေပြီ။ ဒီ ICU ထဲ ရောက်နေတဲ့သူက သေမလား ရှင်မလားကို ဘာဆေးထိုးမလဲ။ အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ဆေးပြင်းထိုးသင့်ရင် ထိုးရမယ်။ လွှတ်ပေးသင့်ရင် လွှတ်ပေးရမယ်။ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ တိုင်းပြည်ပျက်သွားမှာလား။ ဘာမှမကုဘဲ အသေခံမလား။ ဒီနှစ်လမ်းကို ရွေးရတော့မယ်” ဟု ဦးအေးသောင်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြည်သူအများစု သိရှိခံစား နေကြရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာကြောင့် မသိရှိသနည်းဟု ဦးအေးသောင်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ယင်းအခြေအနေအပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“သူဌေးကတော့ တောင့်ခံနိုင်သလောက်သူတောင့်ခံမယ်။ မရတဲ့အဆုံး တစ်ခွန်းတည်းပဲ။ စက်ရုံပိတ်လိုက်တော့။ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်လိုက်တော့ဆိုရင် ဘာဖြစ်ကုန်မလဲ။ နောက်ဆက်တွဲမှာ တော်တော်ဂယက်ကြီးပါတယ်” ဟု ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ အရောင်းအ၀ယ် နှေးကွေးမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရင်ဆိုင်ရပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ လုပ်ငန်းလျှော့ချလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေမှာ မျှော်လင့်သလောက် ၀င်ရောက်မလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းတယ်။ အမြတ်ရနိုင်ခြေ များတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို လုပ်ငန်းရှင်တွေက စောင့်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လန်းဆန်းလာဖို့ဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဈေးကွက်ထဲ ၀င်ရောက်လာဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေခင်ဗျ။ အဲဒီလို ၀င်ရောက်လာဖို့ အချက်များစွာ လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့ အထဲက အချက်နှစ်ခုကို ရှာဖွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဘဏ်ချေးငွေ အတိုးနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ချေးငွေဟာ ၁၃ ကျပ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတွေဟာ တွက်ခြေမကိုက်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဟာကို ကိုးရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း။ ယာယီအားဖြင့် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်လျှော့ချပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ တင်ပြလိုပါတယ်။ ဒုတိယအချက် အနေနဲ့ အခွန်နှုန်းထားများ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် အခြေပစ္စည်း ၀ယ်ယူရပါတယ်။ ၀ယ်ယူပြီဆိုတာနဲ့ အခွန် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်နေရပါတယ်။ လုပ်ငန်းမစသေးဘူး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်နေရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအခွန်ကို ငါးရာခိုင်နှုန်းကို တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်လျှော့ချပေးဖို့ တင်ပြပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ အခြေပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် ဘဏ်ချေးငွေနဲ့ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချေးငွေနဲ့ ၀ယ်တဲ့သူတွေက ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်း ပေးနေရတာဖြစ်လို့ ဒီ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးဖို့ကိုလည်း တင်ပြလိုပါတယ်” ဟု သြဂုတ် ၂၇ ရက်က နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဦးမောင်ဝိတ်က တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စတင်ပါက ကနဦး မြှုပ်နှံငွေ Paid-Up Capital ကို အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း တင်ပြနေရပြီး နိုင်ငံခြားသားများမှာ တင်ပြရန် မလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများနည်းတူ Paid-Up Capital ကို အခွန်ဆောင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြစရာမလိုကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းပေးစေ လိုပါတယ်လို့ ဦးမောင်ဝိတ်က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များကို အသားပေး တင်ပြခဲ့ပြီး ထိုသို့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ ပေးပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အများအပြား ၀င်ရောက်လာမယ်လို့ ဦးမောင်ဝိတ်က ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခွန်ကောက်ခံမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ပေးဆောင်ရခြင်းမှာ ၀င်ငွေရလမ်း မပြနိုင်သည့် ငွေများကိုသာ စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ငွေများကိုသာ အခွန်ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပြီး ၀င်ငွေရလမ်းပြနိုင်သည့် အခွန်ဆောင်ထားသည့် ငွေများဖြစ်ပါက အခွန်ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ပေးဆောင်ရမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဦးမောင်ဝိတ်က တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များနဲ့ လုပ်သားလျှော့ချရမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ကျွန်မတို့ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ကြည့်လို့ရှိရင် အဘက်ဘက်က ကြည့်ရပါတယ်။ တစ်ဖက်တည်းက ကြည့်လို့မရပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင် တချို့အလုပ်တွေမှာ အလုပ်တွေ မဖြစ်တာတွေကြောင့် အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ကနေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ် ဆိုပေမဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့ Data တွေအရ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက တက်မလာဘူးဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာတော့ အလုပ်သမားတွေကို ရပ်ဆိုင်းနေတယ် ဆိုပေမဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ ဆက်ပြီးတော့ ၀င်နေတယ် ဆိုတာကို သတိပြုမိဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကလည်း ဘဏ်တိုးနှုန်းပေါ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ဒါတွေကို မဆုံးရှုံးချင်ဘူး။ မဆုံးရှုံးဖို့ အာမခံချက် စောင့်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မတစ်ခုတော့ ပြောချင်တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာ စွန့်စားရဲရတယ်။ အအောင်မြင်ဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မယ်ဆိုမှ ၀င်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသူတွေမလုပ် ရဲတဲ့ မလုပ်တတ်တဲ့လုပ်ဖို့ မစဉ်းစား တာတွေကို စွန့်စားပြီးတော့ အတိုင်း အတာတစ်ခုရှိလို့သာ အင်မတန်မှ အောင်မြင်သွားကြတာပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်သူကမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ပြောရမယ် ဆိုရင် ဒေါ်လာဈေးပေါ့။ ဒေါ်လာ ဈေးဟာ ပြင်ပကမ္ဘာကနေ ရိုက်ခတ်လာတာ။ ကျွန်မတို့က ပြင်ပကမ္ဘာ ကနေ ရိုက်ခတ်လာတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ထားလို့ မရဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်ပူစရာ မရှိဘူးဆိုတာတော့ ကျွန်မတို့က ဘယ်တော့မှ အာမခံချက်ပေးလို့ မရဘူး။ တချို့ကိစ္စတွေကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်ပေး ပါမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အခွန်အခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးပညာရှင် ကြီးများဟာ အခွန်လွတ်ကင်းမှုတွေ ပေးတာကို သဘောမတူသူတွေ ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာရှုထောင့်က နေကြည့်ရင် အခွန်လွတ်ကင်းမှုတွေ များများပေးတာဟာ နိုင်ငံ့ရဲ့ စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုအတွက် အကျိုးမရှိ ဘူးဆိုပြီး အကြံပြုတဲ့စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အစိုးရက အဘက်ဘက်ကိုလည်း နား ထောင်ရပါတယ်။ အဘက်ဘက်ကို လည်းချိန်ဆရပါတယ်။ စီးပွားရေး တစ်ကွက်ကိုလည်း ကြည့်လို့မရဘူး။နှစ်ကွက်သုံးကွက်ကိုလည်း ကြည့် လို့မရပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ လို အပ်ချက်ကို ကြည့်ရုံမကဘူး။ ကမ္ဘာ့ ရဲ့ ရေစီးကြောင်းကိုလည်း ကြည့်ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကို တော့ အလေးအနက်ထားပြီး တိုင် ပင်ပေးပါ့မယ်။ မလုပ်ဘူး။ လုပ်မယ် ကတော့ ဒီမှာတော့ဘယ်လိုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေးလို့တော့ မရသေးပါဘူး” ဟု တုံ့ပြန်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
နုတ်ထွက်သွားတဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းနေရာမှာ အစားထိုး ၀င်ရောက်လာတဲ့ ၀န်ကြီးအသစ် ဦးစိုးဝင်းက ကျန်ရှိတဲ့ အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မည်သည့် ကတိကိုမျှ မပေးနိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ လျှော့မတွက်နိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေကြောင်းကို ဇွန် ၅ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးသစ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပြီးနောက် သတင်းထောက်များနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျီဒီပီ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အခြေအနေ လေ့လာခြင်း
မြန်မာ့စီးပွားရေး တိုးတက်နေတယ်။ နှုန်းအားဖြင့် တိုးတက်နေတယ်။ အာရှဒေသမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောထားပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြားချက်ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂျီဒီပီတိုးတက်မှု၊ ငွေဖောင်းပွမှု လျော့ကျမှု၊ LDC ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းစပေါ်လာမှု၊ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ဒေါ်လာငါးဘီလျံကျော်ကနေ လေးဘီလျံလောက်အထိ လျှော့ချနိုင်မှု၊ ဆန်တင်ပို့မှုနဲ့ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍက ပို့ကုန်ရငွေမြင့်တက်မှုစတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရသစ် စတင်တာဝန်ယူစမှာ ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းက ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ခန့်မှန်းခြေမှာ ၆ ဒသမ ၈ ဖြစ်လာပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခြောက်လဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းလာနိုင်ပြီး၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှာ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသွားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းတာကတော့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းက ၆ ဒသမ ၈ ပဲ ရှိပါတယ်။
အာဆီယံမှာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု၊ လာအိုကိုတောင် ကျော်တက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက စီးပွားရေး အရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်ဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ဂျီဒီပီဟာ Two Digit မှာ ရှိနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ နှုန်းအားဖြင့် တက်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အခြားညွှန်းကိန်းတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကျဆင်းပြီး Two Digit ကနေ Single Digit ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသာကျတယ် ဆိုပေမဲ့ တွက်ချက်ပုံ ပြောင်းလဲထားတာ၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်တဲ့ အမျိုးအမည်တွေ ထပ်တိုးထားတာ၊ အခြေခံနှစ် ပြောင်းပစ်လိုက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေကြားမှာ စားဝတ်နေရေး ပိုပိုပြီး ကျပ်တည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို တိုင်းတာမယ်ဆိုရင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကျဆင်းလာလည်း ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာ ရှိလာပါတယ်။
“စီးပွားရေးတက်တယ်၊ ကျတယ်ထက် ဂျီဒီပီမှာတော့ နည်းနည်းလေးကျတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဂျီဒီပီရဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်းနဲ့ပြောရင် မှန်းထားသလောက် ထင်သလောက် မတက်လာဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က စီးပွားရေးဆိုတာ ဂျီဒီပီတစ်ခုတည်း ကြည့်လို့မရဘူး။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သာယာဝပြောမှုပေါ့ဗျာ။ လူနေမှု အဆင့်အတန်းပေါ့။ ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာလဲ ဆိုတာလည်း ကြည့်ရတယ်။ ဂျီဒီပီတစ်ခုတည်းကတော့ အရေးမကြီးဘူး မဟုတ်ဘူး။ အရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျီဒီပီတိုးတက်မှု တစ်ခုတည်းနဲ့ စီးပွားရေး တစ်ရပ်လုံးကို ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း တစ်သမတ်တည်း ပြောလို့မရဘူးဗျ” ဟု စီးပွားရေး သုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက သုံးသပ်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ လျှပ်စစ်မီးက မကြာမကြာ ပြတ်တောက်တဲ့ ပြဿနာ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ ပျက်ရင်လည်း ခဏလေးပဲ၊ ပြန်လာတယ်။ ဒါကလည်း လူနေမှု အဆင့်အတန်းတစ်ခု မြင့်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ဘတ်ဂျက်ခွဲတဲ့ အခါမှာ ဘာပဲပြောပြော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍမှာ ပိုပြီးသုံးလာတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါလည်း ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ အရင်တုန်းက ဘဏ္ဍာရေးခွဲတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကို ဘဏ္ဍာရေးပိုပြီး ခွဲလာတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပို့ကုန်နဲ့ သွင်းကုန်မှာ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ကွာဟမှုက နည်းနည်းလေး ကျဆင်းလာတယ်။ ဒီနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အရာတွေလည်း အများကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ ဥပမာ-ရခိုင် ကိစ္စပေါ့။ ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ဝေဖန်ခံရ တယ်။ တကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေ အနေမှန်ကို မကြည့်ဘဲနဲ့ အခြေအ နေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီး ဇောင်းပေးပြီး ဝေဖန်ခံရတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေ တွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မြန်မာ့စီးပွား ရေးက ဘာပဲပြောပြော ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်ကြည့်ရင် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ၀ယ်ယူ နိုင်စွမ်းအားက အဲဒီလောက်အထိ မကျဆင်းသွားဘူး။ ဥပမာ-မော် တော်ကားအသစ် ရောင်းရမှုနှုန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ခုနစ်လထက်စာရင် ဒီနှစ် မှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၀၀ ကျော် တိုးတက်လာတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဘာပဲပြောပြော လူ တွေလက်ထဲမှာ အတိုင်းအတာတစ် ခုအထိ ၀င်ငွေရှိတယ်။ ၀ယ်ယူနိုင် သေးတယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက တော့ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကတော့ တော်တော်လေး ကျဆင်းသွားတယ်။ ဒီကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းသွားတဲ့ အတွက် ပို့ကုန်တွေတက်လာတယ်။ အထူးသဖြင့် Garment Sector က တက်လာတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ကိစ္စ၊ မီဒီယာအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့ကိစ္စ၊ ဒါတွေကလည်း အင်မတန် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို နိုင်ငံရေးဗျူဟာ တစ်ခုအနေနဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားဖို့ လိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံနေရတဲ့ အဓိကအခက်အခဲများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဓိကပြဿနာတွေက မြေဈေးကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က မြေဈေးကြီးမြင့်တယ်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ကြီးမြင့်တယ်။ နှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ မြေဈေးတော်တော်လေး ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကလည်း အတန်အသင့် ကျသွားတယ်။ ဒါက တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုလို့ ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီအတွက် ဘဏ်တိုးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘဏ်တိုးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာမှာ ဘဏ်တိုးနှုန်းကို လျှော့သင့်မလျှော့သင့် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ အများပိုင် Listed ကုမ္ပဏီက ငါးခုပဲရှိသေးတယ်။ အဲဒီငါးခုကနေ ဥပမာ -၁၀ ခု၊ ၁၅ ခုပေါ့။ လာမယ့်နှစ်နှစ် ခွဲအတွင်းမှာ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘာ ပဲပြောပြော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အများပိုင် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏတွေ တိုးတက်လာ မှာပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ဒီကာ လတွင်းမှာ မြေဈေးကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ကျသွားတဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့အချက်လို့ ပြောလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ပြောပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ အဓိက ပြဿနာက မြေဈေးကြီးတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လျှပ်စစ်မီးပေါ့။ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အား နည်းတဲ့ပြဿနာကလည်း အဓိက ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးနီစနစ် မြင့်မားနေတာတွေက အဓိက ပြဿ နာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေအကုန် လုံးကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချသွား နိုင်မယ်ဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်မှုအားတွေ ပိုကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်ကတော့ ကြိုးနီစနစ်က တော်တော်ကို ရှိနေသေး တာပါ။ ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအလိုက် သွားရမယ့် စီးပွားရေးမဟာ ဗျူဟာတွေမှာလည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေမှာ အားထည့်ဆောင်ရွက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဓိက က ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ထုတ်ပေးတာတွေ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါက လုပ်ငန်းရှင်ရော သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေရော ပူးပေါင်းပြီး ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်လို့ ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း
“လာမယ့် နှစ်နှစ်ခွဲ အတွင်းမှာပေါ့။ ၂၀၁၉ အတွင်းမှာတော့ နည်းနည်းလေး ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ အခုဆို ဂျပန်အပါအ၀င် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ၀င်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုဆိုရင်လည်း A6 ပေါ့။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်တစ်ခုကို တွေ့တယ်။ ဒါတွေကလည်း တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက် အလားအလာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် MyCo ပေါ့။ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်တာတွေ ပိုမိုလွယ်ကူလာတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်။ ဒါတွေကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါ” လို့ ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုအကောင်းဘက်ကို မျှော်လင့်ပေမဲ့လည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကြိုးနီစနစ်တွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြန့်ကြာမှုတွေနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စတွေကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
“အားနည်းချက်တွေက ဗျူရိုကရေစီယန္တရားက ကြိုးနီစနစ်မှာ အားနည်းတယ်။ ရုံးတွေမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကစားပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အချိန်ကြန့်ကြာတာတွေ၊ မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာတာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်ကြည့်ရင် Anti Corruption လိုကိစ္စတွေ ဘာပဲပြောပြော ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာတယ်။ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလာတယ်။ ဒါတွေကလည်း အင်မတန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြင်ရမယ့်ဟာတွေ လိုအပ်နေတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့ ၂၀၁၉ မှာတော့ လက်ရှိထက် နည်းနည်းလေးပိုပြီး ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ဆိုပါတယ်။
ရာသီဥတု ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်တာတွေက နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဆက်လက်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သစ်တောတွေပြန်ပြီး စိုက်ရမယ်။ သစ်တောခုတ်တာတွေကို ရပ်ဆိုင်းရမယ်။ အဲဒါတွေကလည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲနေတာတွေအတွက် ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးအရေးကြီးတာက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပါပဲ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရသေးတဲ့ ဒေသတွေ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကနေ ဓာတ်အားပေးတဲ့ စနစ်တွေ ပြောင်းလဲတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပဲလို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာ နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကမ္ဘာ့ငွေကြေး ဈေးကွက်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာက ခိုင်မာသွားတယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးက ရုတ်ခြည်းထိုးကျသွားတယ်။ ထိုးကျသွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးမှာ လိုငွေပြတယ်၊ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ ပမာဏကလည်း တခြားနိုင်ငံတွေလို လုံလုံလောက်လောက် အပိုအလျှံ မရှိပါဘူး။
“ကျွန်တော့်အထင်ပေါ့။ အဲဒီကာလတွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀ယ်လိုမှုက ရုတ်ခြည်းမြင့်တက်သွားတာ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ဥပမာ-ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားတွေ ၀ယ်တဲ့အခါ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ ၀ယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီတွေကလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ လိုအပ်ချက်ကို ရုတ်ခြည်းမြင့်တက် စေပါတယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကို ရုတ်ခြည်းထိုးကျသွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုထဲမှာ ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြန်မာကျပ်ငွေ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး သုံးစွဲခဲ့တာကိုး။ နောက်တစ်ခုက ငွေကြေး ဈေးကစားသူတွေပေါ့။ ဒါတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံတကာမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး တက်သွားတယ် ဆိုတာနဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းနှစ်ခု ပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ မြန်မာကျပ်ငွေက ကျသင့်ကျထိုက်တာထက်ပိုပြီး ကျသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်၂၀၁၉ မှာတော့ ဒီလိုမျိုးတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်” ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရသစ် တက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုအကြား ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ ထားခဲ့ပေမယ့် စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ မျှော်မှန်းထားသလောက် မရခဲ့ပါဘူး။ ကုန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရသစ် သက်တမ်းတစ်ဝက်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေအကြား ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့ လာမယ့် လက်ကျန်သက်တမ်းအတွက် အချိန်မီသေးတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်မကျသေးပါဘူး။ အချိန်မီပါသေးတယ်။ လုပ်စရာတွေတော့ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်” လို့ Parami Energy Group CEO ဦးပြည့်ဝထွန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းကလည်း “မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး။ တကယ်လုပ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ တကယ်လုပ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်က စီးပွားရေး အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်၊ နောက်မကျသေးပါဘူး” ဟု သုံးသပ်ပြောကြား ထားပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged စီးပွားရေးLeaveaComment on အစိုးရ လက်ကျန်သက်တမ်း တစ်ဝက်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာ ဘယ်လိုရှိလာမလဲ
ထိုင်းအေဂျင်စီ၊ HR ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်တာခံနေရတဲ့ မြန်မာ MoU အလုပ်သမားတွေဘ၀ ကယ်တင်ဖို့လိုပြီ
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by ဥာဏ်ဝင်းရှိန်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို တွေ့ရစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ အလုပ်သမားတွေကို MoU စနစ်နဲ့ ပို့ဆောင်လာတာ နှစ်အတန်ငယ် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားဝင်အေဂျင်စီတွေကနေ MoU စနစ်နဲ့ သွားဖို့အတွက်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်က ခန့်မှန်းခြေအနည်းဆုံး ကျပ်ခြောက်သိန်းကနေ ကျပ်ရှစ်သိန်းကြားမှာ ကုန်ကျနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကုန်ကျရမယ့် ငွေပမာဏဟာ မြန်မာဘက်ခြမ်း အေဂျင်စီတွေကိုပေးရမယ့် အကျိုးဆောင်ခ၊ ထိုင်းဘက်မှာ ကုန်ကျမယ့်စရိတ် အားလုံးပေါင်းရင်တောင် ကျပ်သုံးသိန်းကျော်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေ၊ ကုမ္ပဏီ HR တွေရဲ့အမြတ်ကြီးစားမှုတွေကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ တကယ်တမ်းကုန်ကျမယ့် ပမာဏထက် ပိုမို ပေးဆောင်နေရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာအလုပ်သမား ခန့်မှန်းခြေ နှစ်သန်းခွဲကျော်ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားအတွက် အောက်ခြေအဆင့် အလုပ်သမားတွေကို အိမ်နီးချင်းဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ ငှားရမ်းခေါ်ယူခိုင်းစေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လူကုန်ကူးမှုတွေ၊ အလုပ်သမားတွေအပေါ်ကို ကျွန်ပြုစေခိုင်းမှုတွေကြောင့် ထိုင်းရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အဓိက၀ယ်ယူနေတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ၀ယ်ယူမှုရပ်ဆိုင်းပြီး သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ထိုင်းရေထွက်ကုန် စီးပွားရေးဟာ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုတွေ၊ အဓမ္မလုပ်အားစေ ခိုင်းမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ရပ်တန့်ဖို့အတွက် ထိုင်းအာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရက ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှု အက်ဥပဒေကို ရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ တရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေကို စေခိုင်းမှုပပျောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကောင်းရဖို့အတွက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
တရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးမှုတွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုစတဲ့ နိုင်ငံတွေက တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာ နေရပ်ကိုပြန်ပြီး အထောက်အထား စုံလင်အောင်လုပ်ပြီးမှ တရားဝင်အလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ အစိုးရချင်း နှစ်နိုင်ငံ MoU စနစ်နဲ့အလုပ်သမားတွေစေလွှတ်ဖို့အတွက် သဘောတူထားတဲ့အတွက် တရားဝင်စနစ်ဖြစ်တဲ့ MoU နဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို လစဉ်ပျမ်းမျှတစ်သောင်းခွဲလောက် ထွက်ခွာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ MoU စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေကို အလုပ် အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတွေကနေတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့အတွက် အလုပ်သမားတစ်ဦးက အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အလုပ်သမားတွေကို အေဂျင်စီက လိုက်လံစုဆောင်းဖို့အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အရပ်ပွဲစားတွေကနေတစ်ဆင့် စုစည်းရပါတယ်။ ဒေသအသီးသီးက အရပ်ပွဲစားတွေကနေ စုစည်းလာတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အေဂျင်စီက နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားဌာနတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အလုပ်ရှင် ဒါမဟုတ် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှ စေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ အေဂျင်စီကို အကျိုးဆောင်ခ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာ ဗီဇာကြေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်၊ လူမှုဖူလုံကြေးစတဲ့အရာတွေအတွက် အများဆုံးဘတ်သုံးထောင်၊ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် ကျပ်ငွေ သုံးသိန်းကျော်လောက်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ကုန်ကျစရိတ်က ကျပ်ငွေ ခြောက်သိန်းကနေ ရှစ်သိန်းကြားမှာ ကုန်ကျနေရပါတယ်။
ဘာကြောင့် အလုပ်သမားတွေက ကုန်ကျသင့်တာထက် ပိုပေးနေရတာလဲ
အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကို အရပ်ပွဲစားတွေကတစ်ဆင့် အေဂျင်စီ၊ အေဂျင်စီကနေတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ရောက်ရှိကြရတာပါ။ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီက ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေ အလုပ်ခေါ်စာရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာရပြီးမှ အလုပ်သမားတွေကို စာချုပ်ချုပ်ပြီး စေလွှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအေဂျင်စီတွေဟာ ထိုင်းအလုပ်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တာမျိုး မရှိတဲ့အတွက် ထိုင်းအေဂျင်စီတွေကနေတစ်ဆင့် အလုပ်ခေါ်စာကို ယူရတာပါ။ ဒီအတွက် ထိုင်းအေဂျင်စီကို ပေးဆောင်ရမယ့် အကျိုးဆောင်ခ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေက HR မန်နေဂျာတွေကို ပေးဆောင်ရတဲ့ အခကြေးငွေ၊ အရပ်ပွဲစားကိုပေးရတဲ့ ၀န်ဆောင်ခစတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒီကုန်ကျ စရိတ်တွေအားလုံးကိုတော့ အလုပ်သွားလုပ်မယ့် အလုပ်သမားတွေကပဲ ပေးဆောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အလုပ်သမား တစ်ဦးဟာ ပုံမှန်ကုန်ကျမယ့် ငွေပမာဏထက် ပိုပြီး ကုန်ကျနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ ခန့်မှန်းခြေ ကျပ်ငါးသိန်းလောက် ပိုပေးနေရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရ အေဂျင်စီတစ်ခုဟာ အလုပ်သမားတစ် ဦးစီက အကျိုးဆောင်ခ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲပဲ ယူရတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေက အလုပ်ခေါ်စာရဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ HR မန်နေဂျာလိုမျိုး ကြားခံလူတွေကတောင်းတဲ့ ငွေကြေးအများ အပြားကို အလုပ်သမားကပဲပေးရတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုကုန်ကျနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က တစ်ဆင့်ခံပွဲစားတွေ၊ HR ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေဟာ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဒီကိစ္စဟာ သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းနဲ့မဆိုင်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေနဲ့သာ ဆိုင်တယ်ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုးပါတယ်။ သူတို့ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေကိုမလိုက်နာဘဲ ချိုးဖောက်တဲ့ အေဂျင်စီတွေကို သတိပေးမှုတွေပြုလုပ်သလို ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ငွေပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်သတိပေးမှုတွေလုပ်နေပြီး တကယ်လို့ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက ပြဿနာသာဖြစ်မယ်လို့ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး Anurak Tossarat က AFP သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းဘက်ခြမ်းက မြန်မာဘက်ခြမ်းကို ဘော်လီဘော ပုတ်လိုက်ပေမယ့် မြန်မာဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေကလည်းသူတို့ အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲ၊ အခြားအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက် ကြားခံပွဲစားတွေကနေသာ ချိတ်ဆက်နေရတာဖြစ်ပြီး ထိုင်းအလုပ်ရှင်နဲ့ အေဂျင်စီကြားမှာ ချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ ထိုင်းပွဲစားအေဂျင်စီတွေရဲ့ တောင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆောင်ခကိုပေးဖို့အတွက် ဈေးဆစ်လို့မရတဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က အေဂျင်စီတွေပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်သမားတွေစေလွှတ်ဖို့အတွက် အလုပ်ရှင်နဲ့ မြန်မာအေဂျင်စီကြား ပေါင်းကူးပေးတဲ့ ကြားခံ ထိုင်းအေဂျင်စီတွေရဲ့ တောင်းဆိုတဲ့ငွေကို ပေးနိုင်မှသာလျှင် အလုပ်ခေါ်စာတွေရပြီး အလုပ်သမားတွေ မြန်မြန်စေလွှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေဘက်က ဆိုပါတယ်။
“ထိုင်းဘက်က အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေနဲ့က တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်။ ဒီအတွက် အလုပ်ခေါ်စာတွေရဖို့ အတွက်က ထိုင်းဘက်ခြမ်းက အကျိုးဆောင်ကိုပဲ အားကိုးနေရတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ ပို့ဖို့အတွက် အလုပ်ခေါ်စာတွေရမှ ပို့လို့ရမယ်။ အလုပ်ခေါ်စာတွေရဖို့အတွက် ထိုင်းဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေ တောင်းတဲ့ငွေကို ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။ သူတို့တောင်းတဲ့ငွေထက် ပိုပေးနိုင်ရင် အလုပ်ခေါ်စာတွေ များများရတယ်။ ဒီလိုသဘော တရားတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့်ကိုတောင်းတဲ့ ဘတ် ၁၀၀၀၀ ကို များတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်မပေးဘဲ တင်းခံနေရင် တခြားအေဂျင်စီက တစ်သောင်းခွဲပေးရင် အဲဒီပိုပေးတဲ့အေဂျင်စီက အလုပ်ခေါ်စာတွေ ရသွားတာပဲ” လို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု အေဂျင်စီပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ဖွင့်ဟပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အင်ဒီဟောကတော့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းကိုလာရောက် အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ကုန်ကျရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးထက်ကို ပိုပြီးပေး ဆောင်နေရသလို သူတို့ရဲ့ လစဉ်လုပ်ခလစာတွေထဲက ဖြတ်တောက်တဲ့အတွက် အကြွေးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ခံထားရပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်နေပြီး အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အေဂျင်စီပွဲစားတွေ၊ HR တွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စကို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပြီလို့ ထောက်ပြပါတယ်။
“ထိုင်း-မြန်မာ MoU စာချုပ်မှာ အနိမ့်ဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြဋ္ဌာန်းမထားပါဘူး။ မြန်မာအစိုးရက သတ်မှတ်ထားတာက မြန်မာအေဂျင်စီတွေက အကျိုးဆောင်ခ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲပဲယူရမယ်။ ထိုင်းအစိုးရက သတ်မှတ်ထားတာက ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေက သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ပေးရမယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ အဲဒီအစား လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာက ထိုင်းကုမ္ပဏီ HR တွေ၊ ကြားခံပွဲစားတွေနဲ့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေကြားမှာ ကျကျနန ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေရဲ့ ရလဒ်ကတော့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းအစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထက် အဆမတန် ပိုပေးနေရတာပါ” လို့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အင်ဒီဟောက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MWRN အဖွဲ့မှ ကိုစိန်ဌေးကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေရဲ့ မတရားအမြတ်ကြီးစား တောင်းခံတဲ့ငွေတွေကို မြန်မာအလုပ်သမားတွေကပဲ ပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒီကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
“အခုက အလုပ်သမားတွေက သတ်မှတ်ကုန်ကျတာတွေထက် ပိုပေးနေရတာပါ။ တကယ်တမ်း သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်က မြန်မာဘက်က အေဂျင်စီအကျိုးဆောင်ခ၊ ဗီဇာကြေး၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်ကြေးစတာတွေ အားလုံးပေါင်းရင် သုံးသိန်းမကျော်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ထိုင်းဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေ၊ အလုပ်ခေါ်စာရဖို့အတွက် ထိုင်းစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံက HR မန်နေဂျာ စတဲ့သူတွေက ငွေညှစ်တဲ့သဘောနဲ့ မတန်တဆ တောင်းနေတာတွေကို မြန်မာအေဂျင်စီတွေဘက်ကနေ ပေးနေရတဲ့အတွက် ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကို ဒီမြန်မာအလုပ်သမားတွေကပဲ ကုန်ကျနေရတာပါ။ မြန်မာအေဂျင်စီတွေ အနေနဲ့ ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခေါ်ယူဖို့အတွက် အစိုးရက စီစဉ်ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်သမားတွေ သက်သာရာ ရောက်သွားမှာပါ။ အလုပ်သမားတစ်ဦးက ပျမ်းမျှတစ်ဦးကို ကျပ်ငါးသိန်းပဲ ပိုကုန်ကျနေတယ်ထားဦး။ MoU နဲ့ တရားဝင်သွားတဲ့စာရင်းက တစ်လကို ပျမ်းမျှတစ်သောင်းခွဲရှိတယ်ဆိုရင် သိန်းခုနစ်သောင်းကျော် အလုပ်သမားတွေက လတိုင်းပေးဆောင်နေရတာပါ။ ဒီငွေတွေက မကုန်သင့်ဘဲ အလုပ်သမားတွေ ကုန်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ MWRN မှ ကိုစိန်ဌေးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က တစ်ဆင့်ခံအေဂျင်စီတွေ၊ HR တွေရဲ့ အကျင့်ပျက် ငွေညှစ်မှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေကြားထဲမှာ အမြတ်ထုတ်ပြီး မတန်တဆ ခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ အကျိုးဆောင်ပွဲစားတွေ၊ အေဂျင်စီတွေကို ငွေပေးနေရမှု ရပ်တန့်ဖို့ဆိုရင်တော့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေနဲ့ ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကိုသေသေချာချာ ထိန်းကျောင်း ကြပ်မတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသလို တကယ်လို့ တိုက်ရိုက်သာ ချိတ်ဆက်ခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေ ပေးဆောင်နေရတဲ့ ၀န်ဆောင်ခကြီးမြင့်မှုတွေကို ရပ်တန့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်း-မြန်မာ အလုပ်သမားရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထောက်ပြပြောဆို ပါတယ်။
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးအေ ဂျင်စီပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို MOEAF မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ထင်ကျော်က လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က ထိုင်းဘက်ခြမ်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေ ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကို အေဂျင်စီနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြားခံထိုင်းအေဂျင်စီ၊ အကျိုးဆောင်တွေကနေ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ပိုကုန်ကျနေတာဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အလုပ်သမားခေါ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မလုပ်ချင်တဲ့အတွက် ကြားပွဲစားကနေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီဖြစ်စဉ်ကို ရပ်တန့်နိုင်ရင်တော့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အများကြီးအကုန်အကျ သက်သာသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အလုပ်သမားတွေက ကုန်ကျစရိတ်များပြားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ထိုင်းဘက်က အလုပ်ရှင်သူဌေးတွေနဲ့တို့ ဒီဘက်က အေဂျင်စီတွေက တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘဲ ကြားထဲမှာ အကျိုးဆောင်ပွဲစား ခံထားတယ်။ ပွဲစားကလည်း သူ့အတွက်ကိုက်မယ့် အလုပ်ပဲ သူလုပ်တယ်။ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ တကယ်တမ်း ထိုင်းဘက်မှာ ကုန်ကျမယ့်ဟာက ဗီဇာကြေး၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နဲ့ ဆေးကုသစရိတ် အာမခံ စုစုပေါင်း ဘတ် ၂၀၀၀ ကျော်၊ ၃၀၀၀ ကျော်ပဲရှိမှာ။ သို့သော်လည်း အလုပ်သမားတွေ တကယ်တမ်းပေးနေရတဲ့ မတရား ဘတ် ၇၀၀၀၊ ၈၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ တို့ဆိုတာက ဒီပွဲစားတွေက အလုပ်သမားတွေဆီကနေ ရိတ်နေတာ။ ခက်တာကလည်း ထိုင်းအလုပ်ရှင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အေဂျင်စီတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မလုပ်ဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အပျင်းကြီးတာပေါ့။ မြန်မာအေဂျင်စီတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေ အများကြီးသက်သာတယ်။ ဥပမာ ထိုင်းစက်ရုံတစ်ရုံက အလုပ်သမားလိုချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာအေဂျင် စီဘက်ကို သူဌေးဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် သူမအားရင်တောင် ကိုယ်စားလှယ်ကနေက စာရွက်စာတမ်းတွေ လှမ်းပေးရမယ်။ ပြီးရင် ထိုင်းဘက်ခြမ်းက DOE တို့ တခြားလိုအပ်တဲ့ဌာနတွေကို တင်တာတို့ လိုက်လုပ်ပေးရတယ်။ ပြီးရင် ထိုင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးမှာ သွားတင်ရတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာရမှ မြန်မာဘက်က ၀န်ကြီးဌာနကို လှမ်းတင်ပြပြီး ဒီဘက်ကအေဂျင်စီတွေက လှုပ်ရှားရတယ်။ ဒီလိုမျိုး စာရွက်စာတမ်းတွေ တင်တာတွေကို ထိုင်းဘက်က မလုပ်ချင်တဲ့အတွက် ကြားပွဲစားတွေငှားတယ်။ ပွဲစားတွေက မြန်မာအလုပ်သမားတွေဆီကနေ မတရား ငွေတွေယူတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမားတွေက ပိုပေးနေရတာ။ ဒီဘက်ကနေပြီး ထိုင်းဥပဒေအရ တကယ်တမ်းကုန်ကျရမယ့်ပမာဏကို ဒီဘက်က တောင်းထားတာ ရှိတယ်။ ဒီဟာ ထွက်လာရင်တော့ ကြားထဲက နေ ပိုယူထားတဲ့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းကပွဲစားတွေ ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်” လို့ ဦးကျော်ထင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးကို MoU စနစ်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီတွေကို ကျပ်တစ်သိန်းခွဲပဲယူဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့ အေဂျင်စီတွေဆိုရင် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်နေပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေဟာ သတ်မှတ်နှုန်းထားထက် ပိုတောင်းခံပြီး အမြတ်ထုတ်မှုတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြီး အရေးယူပေးဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောပါတယ်။
“MoU စနစ် ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ထိုင်း DOE ရဲ့ အလုပ်ခေါ်စာကို အတည်ပြုရတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာကို ဒီက ၀န်ကြီးဌာနကို တင်ပြရတယ်။ မှန်မမှန် ပြန်စိစစ်ရတယ်။ မြန်မာအေဂျင်စီတွေကို တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်ခက ကျပ်တစ်သိန်းခွဲပဲ။ ပိုယူလို့မရဘူး။ ထိုင်းဘက်ခြမ်းက အေဂျင်စီတွေက ထိုင်းအစိုးရသတ်မှတ်ထားတာထက် ပိုတောင်းပြီး အမြတ်ထုတ်မှုတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ထိုင်းဘက်ကို တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြီး အရေးယူပေးဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်” လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဟာ လစဉ်ပျမ်းမျှ တစ်သောင်းခွဲလောက် MoU စနစ်နဲ့ ထွက်ခွာအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့ ကျေးလက်ဒေသက လူတွေဟာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှုတွေကြောင့် မူရင်းလက်ငုတ်အလုပ်တွေကို စွန့်ခွာပြီး တစ်ရက်ပျမ်းမျှ ကျပ်တစ်သောင်းခွဲလောက်ရရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ အောက်ခြေအလုပ်သမားတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်စနစ်ဖြစ်တဲ့ MoU စနစ်နဲ့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပေမဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းဘက်က အေဂျင်စီအချို့ရဲ့ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်မှုတွေကြောင့် အလုပ်သမားအချို့ဟာ စာချုပ်ပါ အချက်တွေကို မခံစားရဘဲ လုပ်အားခ၊ အလုပ်နေရာ မတူညီမှုတွေ စတဲ့အချက်တွေ ချိုးဖောက်ခံနေမှုတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ ထိုင်းအခြေစိုက် အလုပ်သမားရေး ကူညီပေးနေတဲ့ AAC အဖွဲ့မှ ကိုရဲမင်းက ပြောပါတယ်။
“ထိုင်းဘက်က အေဂျင်စီတွေရဲ့မတရား ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်မှုတွေကို ပြောရရင်တော့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေက ထိုင်းဘက်က အလုပ်ခေါ်စာရှာပေးတဲ့ ပွဲစားတွေကို ကပ်ရပါတယ်။ ဒီထိုင်းပွဲစားတွေဘက်က အလုပ်ခေါ်စာပို့ပေးမှ မြန်မာအေဂျင်စီတွေက လူခေါ်လို့ရတာ။ ဒီအတွက် ထိုင်းအစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းထားထက် ပိုတောင်းတယ်ဆိုရင်လည်း မြန်မာအေဂျင်စီတွေက ပေးလိုက်ရတော့တာပဲ။ အဲဒီကုန်ကျစရိတ်ကို အလုပ်သမားတွေဆီကပဲ ကောက်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ အလုပ်သမားတွေက အစိုးရ သတ်မှတ်ထားတာ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ၊ ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ အလွန်ဆုံးပေးရ ဘတ် ၃၀၀၀ မကျော်ဘူး။ စုစုပေါင်း ကျပ်သုံးသိန်းလောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေးရတာတွေက ကျပ်ရှစ်သိန်းကနေ ၁၀ သိန်းကြား ပေးနေရတာပါ” လို့ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ လုပ်သားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရဲမင်းက ဆိုသည်။
Posted in FeaturesTagged MoU အလုပ်သမား, ထိုင်းအေဂျင်စီLeaveaComment on ထိုင်းအေဂျင်စီ၊ HR ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်တာခံနေရတဲ့ မြန်မာ MoU အလုပ်သမားတွေဘ၀ ကယ်တင်ဖို့လိုပြီ
တစ်နေ့ တန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းကို စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့သောက ဘယ်သူဖြေရှင်းပေးမှာလဲ
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကို ဆန္ဒပြမှုကြောင့် အာမခံဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသော အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အဘွားအိုနှင့် ဒေသခံများအား ရုံးချိန်းတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဌေးလှအောင်)
မန္တလေးမြို့ အနီးဝန်းကျင်မှာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စီမံကိန်းတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ တချို့စီမံကိန်းတွေက အရင်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ချထားပေးခဲ့ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေကြတာတွေ ရှိသလို အရင်အစိုးရ ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေကို လက်ရှိအစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ပြန်လည်စိစစ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ခွင့်ပြုချက်ချထား ပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်း အတော်များများကို လက်ရှိအစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ပြန်လည်စိစစ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ပြန်လည်စိစစ်လိုက်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်၊ သတ်မှတ်စံနှုန်းများ၊ ဥပဒေပါ ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များ အစရှိတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင် နေတာကြောင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေရတာ၊ ရပ်ဆိုင်းထားရတာတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ အပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာရှိတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရ လက်ထက်က ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေ အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းတွေကို ချထားပေးခဲ့စဉ်က ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ချထားပေးခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့သလို လက်သိပ်ထိုးပုံစံနဲ့ ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေ (ဥပမာ အစိုးရသစ် မတက်ခင် လပိုင်းအလို) အများအပြား ရှိခဲ့တယ်လို့ စုံစမ်းရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏများစွာနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ၊ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေ ကြားထဲက လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စီမံကိန်းတွေ၊ ဒေသအနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလားအလာ ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့ စီမံကိန်းတွေ အစရှိတဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ တိုင်းဒေသကြီး အကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွားကို ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်ထွန်းစေလာနိုင်မလဲဆိုတာ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်အစိုးရခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေကြတဲ့ စီမံကိန်းများစွာထဲက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏများစွာနဲ့ တည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်း တည်နေရာဟာ မတ္တရာမြို့နယ်နဲ့ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဆိုတဲ့ မြို့နယ်နှစ်ခု အတွင်းမှာ တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးကျောက် ကုန်ကြမ်း ထုတ်လုပ်မယ့်နေရာဟာ မတ္တရာမြို့နယ် အတွင်းမှာ ပါဝင်နေပြီး စက်ရုံတည်ဆောက်နေတဲ့ မြေဧရိယာက ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်းမှာ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်း ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းက ၆၁၇ ဧက ရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနက ဓာတ်သတ္တု အကြီးစား ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအထိ ၂၅ နှစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းမှာ အသုံးပြုမယ့်စွမ်းအင်က ကျောက်မီးသွေးလောင်စာကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ကို ဘိလပ်မြေ တန်ချိန် ၅၀၀၀ ကျ ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ တန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကို မြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စု ကုမ္ပဏီ (Alpha) က အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ စီမံကိန်းအကြား ကနဦး ခွင့်ပြုချက် ချထားပေးခဲ့ချိန်က သဘောတူညီချက်အချို့ကို ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ပုံသေမြေငှားရမ်းခ (Dead Rent) အနေနဲ့ တစ်နှစ်လျှင် တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာအတွက် ငွေကျပ် သိန်း ၂၀ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သတ္တုခွန်သုံးရာခိုင်နှုန်းတို့ကို ကုမ္ပဏီဘက်က နိုင်ငံတော်ကို ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီမံကိန်းအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် တာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ တိုင်ကြားလာခဲ့ပြီဆိုပါက ကုမ္ပဏီက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု မရှိခဲ့ရင် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတာ၊ ပေးသွင်းထားတဲ့ အခွန်အခတွေကို ပြန်လည်သိမ်းယူပြီး လုပ်ကွက်ပြန်လည် သိမ်းယူခံရနိုင်ကြောင်း သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီမံကိန်းဟာ သတ်မှတ်ကာလဖြစ်တဲ့ ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးပြီး ခြောက်လအတွင်း လုပ်ငန်းစတင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူးဆိုရင် အာမခံပေးသွင်းငွေကို နိုင်ငံတော်က သိမ်းယူမှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ဟာ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း စီမံကိန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို အရင်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာ အချက်အချို့ တွေ့ရပါတယ်။ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် (၄) မှာ ဖော်ပြထားတာက “ဤခွင့်ပြုမိန့်အား ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ ခြောက်လအတွင်း လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါက အာမခံငွေအား နိုင်ငံတော်က သိမ်းယူမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဤခွင့်ပြုမိန့်သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်” လို့ ဖော်ပြထားပြီး စည်းကမ်းချက် (၆) မှာ “ဤ ခွင့်ပြုမိန့်၌ သတ်မှတ်စည်းကမ်း ဘောင်အတွင်း မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သော အငြင်းပွားမှုများ၊ စောဒကတက်မှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားပါက ကုမ္ပဏီမှသာ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းရန်၊ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက လုပ်ကိုင်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပေးသွင်းထားသည့် အခွန်အခနှင့် အခြားပေးသွင်းမှုများ သိမ်းယူခြင်း၊ လုပ်ကွက်ပြန်လည် သိမ်းယူခြင်း ခံရမည်ကို သဘောတူ ၀န်ခံကတိပြုရမည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းဟာ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာဆိုရင် သုံးနှစ်ကျော် ကာလကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စီမံကိန်းဟာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အချို့သာ စတင်ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ငန်း ကြန့်ကြာနေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ စီမံကိန်းအပေါ် ဒေသခံအချို့က ကန့်ကွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာ ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထား ပါတယ်။ ဒေသခံတွေဘက်က စီမံ ကိန်းဟာ ခွင့်ပြုထားတဲ့မြေနေရာ ထက်ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်နေပြီး ခွင့်ပြုမိန့်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ အခြား အဖိုးတန်ဓာတ်သတ္တုတွေ တူးဖော်နေတာ၊ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင် ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိ ခိုက်လာနိုင်တာ၊ စက်ရုံတည် ဆောက်မယ့် မြေနေရာဟာ ကျေးရွာ နဲ့ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းသာ ကွာ ခြားနေတာ စတဲ့ အချက်တွေ ကြောင့်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်မှုတွေလုပ် ဆောင်ထားပြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကနေတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနတွေကို တိုင်ကြားမှုတွေပြုလုပ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ ဒေသခံတွေဘက်က ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်ကို အသုံး ပြုထုတ်လုပ်မယ့် ဘိလပ်မြေစက် ရုံစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်မှုတွေ ဆက် တိုက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကုမ္ပဏီ ဘက်ကတော့ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက် နေတာတွေ့ရပါတယ်။ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေရှိနေ သလို ထောက်ခံနေကြတဲ့ ဒေသခံအချို့လည်းရှိနေပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ စီမံကိန်းကိုထောက်ခံတဲ့ ဒေသခံအချို့ကတော့ စီမံကိန်းဟာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ကြောင့်ဆိုပြီး ထောက်ခံတဲ့အ ကြောင်း ပြောဆိုထားကြပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကို ကန့် ကွက်ထားကြတဲ့ဒေသခံတို့ တိုင် ကြားထားတဲ့တိုင်ကြားစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာနက ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆီကနေတစ်ဆင့် ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ အတွင်းက အကြောင်းပြန်ကြားစာ တစ်စောင် ပြန်ကြားပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းပြန်ကြား စာမှာ သတ္တုတွင်းအကြီးစား ခွင့်ပြုထုတ်လုပ်မိန့်အား ပယ်ဖျက်ပေးပါ ရန် တင်ပြလာကြောင်း၊ ဒေသခံ ငါးဦး၏ တင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိမှုမှာ ခွင့်ပြုမိန့်တွင်ပါရှိသော ထုံးကျောက်အစား အခြားအဖိုးတန် ဓာတ်သတ္တု ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ရွှေ၊ ကြွေထည်၊ သလင်းကျောက်များ တူးဖော်၍ ညအချိန် သယ်ဆောင်ခိုးယူခြင်း၊ ခွင့်ပြုဧရိယာ ကျော်လွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလာမှုအပေါ် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်အရ ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနက ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ CaO 52.74%, MgO 1.15%, SiO2 1.71% တို့ ပါဝင်ပြီး အခြားအဖိုးတန် ရွှေနှင့်ဓာတ်သတ္တုများ ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် သယ်ယူမှုများ မရှိကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ မရှိသေးသဖြင့် သတ်မှတ်ဧရိယာ ကျော်လွန်မှုမရှိကြောင်း၊ လူထု အပေါ် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတ္တုတွင်းဒီဇိုင်း (Mine Design) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အကွာအဝေးမှာ မီတာ ၂၀၀ ကွာဝေးသဖြင့် ထုံးကျောက် လုပ်ကွက်နှင့် အောင်သပြေကျေးရွာမှာ မိုင်အားဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်မိုင်ကွာဝေးသောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းနိုင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းမှာ အောင်သပြေကျေးရွာနှင့် နီးကပ်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါစက်ရုံ စီမံကိန်းမှာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် တည်ရှိသဖြင့် ဆက်လက်တည်ဆောက်ရန် သင့်၊ မသင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနဖြင့်သာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စတဲ့အချက်လေးချက်နဲ့ အကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြန်ကြားခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြန်ကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းဌေးလင်းက “သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ၀န်ကြီးဌာနက ဖြေကြားထားတာက အဓိကဖြစ်တဲ့ သတ္တုမိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူက ဦးစားပေး ပြန်ဖြေကြားတာပေါ့။ ၀န်ကြီးဌာနအဖြေကို လေ့လာကြည့်ရသလောက်က သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၊ ဒေသခံတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဖြေရှင်းရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ ပြန် ကြားထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါ ကြောင့် ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတွေ အကြား ပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် သယံဇာတ ၀န်ကြီးဌာနအဖြေက သင့်တော် တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စက်ရုံတည် ဆောက်မယ့်ကိစ္စက အောင်သပြေကျေးရွာနဲ့ နီးကပ်နေတဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ဆက်ပြီးတော့ မေးမြန်းသွားမှာပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေ ကြတဲ့ ဒေသခံတွေကတော့ အခြား အဖိုးတန်ဓာတ်သတ္တုတွေထွက်ရှိ နေတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆို နေ ကြပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ အပေါ်ယံ ကျောက်သား နမူနာကိုသာ ရယူသွားပြီး စစ်ဆေး တာဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးခြားမှု မရှိ နိုင်ကြောင်း၊ တန်ဖိုးရှိသည့် သတ္တု များမှာ မြေအောက် အနက်အတွင်း တည်ရှိနေပြီး တွင်းတူးစမ်းသပ်မှု များအရ အဖိုးတန်ဓာတ်သတ္တု များ တည်ရှိနေကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ မျက်မြင်တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို ဒေသခံတို့က ပြောဆိုထားကြပြန်ပါတယ်။ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အပါအ၀င် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အစရှိတဲ့ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာတွေကို တိုင်ကြားမှုတွေ ပြုလုပ်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစီမံကိန်းနဲ့ ဒေသခံတို့စိုးရိမ်သောက
ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစီမံကိန်းသွားလမ်း တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်မှုအပေါ် ဒေသခံတောင်သူများ ကျိန်စာတိုက် ကန့်ကွက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဌေးလှအောင်)
တစ်နေ့ တန်ချိန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းအတွက် ထုံးကျောက် ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မယ့် လုပ်ကွက်ဧရိယာဟာ မတ္တရာမြို့နယ်အတွင်းမှာ တည်ရှိနေပြီး ကုန်ချောထုတ်လုပ်မယ့် စက်ရုံနေရာဟာ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်းမှာ တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အငြင်းပွားမှု ပြဿနာတွေဟာ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ စက်ရုံစီမံကိန်းဟာ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်းက အောင်သပြေကျေးရွာနဲ့ ကပ်လျက်တည်ရှိနေတာက စတယ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ စက်ရုံတည် ဆောက်နေတဲ့မြေဧရိယာက ကျေးရွာနဲ့ခြံစည်းရိုးသာကွာခြားနေတာကြောင့် ဒေသခံတွေဟာ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာစွမ်းအင်ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းထိ ခိုက်မှာနဲ့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာပြီး လူမှုစီးပွားဘ၀တွေ ထိ ခိုက်မှာကို စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းဘက်ကတော့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ် မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့မှု၊ စီမံကိန်းသွားရာလမ်း ဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပေါ်မှာ ကျူးကျော်ဝင်းခြံခတ်မှု၊ လမ်းတားဆီးပိတ်ဆို့မှု စတဲ့ အမှုတွေနဲ့ စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာ အမှုရင်ဆိုင် နေကြရပါတယ်။ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းပေါ်မှာ ကျူးကျော်လို့ဆိုပြီး အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အဘွားအိုတစ်ဦး အပါအ၀င် ဒေသခံ တောင်သူလေးဦးကို လမ်းတားဥပဒေပုဒ်မ ၂၂၊ ၂၃ နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီး တောင်သူသုံးဦး ဖမ်းဆီးခံထား ရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံးမှာ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ တောင်သူတွေထဲက တောင်သူ ၂၀ ၀န်းကျင် အမှုရင်ဆိုင် နေကြရပါတယ်။ လမ်းမြေပေါ်ကျူးကျော် ခြံခတ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ တောင်သူတွေကတော့ သူတို့အနေနဲ့ ကျူးကျော်ခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့အပြင် လမ်းဖောက်လုပ်မှုအတွက် သူတို့ရဲ့ယာမြေတွေထဲကပါ အနည်းငယ်ပေးထားတယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျေးလက်လမ်းဟာ ဒေသခံတောင်သူတွေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အနေနဲ့ ဖောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ လမ်းဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရောက်ရှိလာချိန်မှသာ ယခုလိုပြဿနာတွေ စတင်ဖြစ်လာတာလို စွပ်စွဲပြောဆို ထားကြပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကျေးရွာလမ်း တိုးချဲ့ရာမှာ တန်ဖိုးရှိကျွန်းပင်တွေကို ကုမ္ပဏီဘက်က ခုတ်လှဲပြီး ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဒေသခံတွေက ကုမ္ပဏီဘက်ကို ပြန်လည်အမှုဖွင့် ထားကြပါတယ်။
တန်ချိန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံတို့ အကြားမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ လမ်းမြေပေါ် ကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရဘက်က ဒေသခံတွေအပေါ် တရားစွဲဆိုထားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းဌေးလင်းက ထောက်ပြပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
“သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ဒီစီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်ချင်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် စက်ရုံကြီး တည်ဆောက်မယ်။ မဖြစ်မနေ ဒီလမ်းမကြီး တိုးချဲ့ရမယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးဝဲယာမှာရှိတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြတဲ့ တောင်သူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရ မယ်။ လယ်ယာမြေ ဥပဒေမှာလည်း သင့်တော်တဲ့လျော်ကြေး နစ်နာကြေးတွေ ပေးရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေ ရှိပြီးသား။ မဖြစ်မနေ လမ်းတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင် အဆင့်ဆင့်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးမှသာလျှင် သည်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမှာ။ အဲဒီလို အကျေအလည် ညှိနှိုင်းမှု မရှိဘဲနဲ့ လိုအပ်တဲ့လမ်း ပေ ၅၀ အကျယ်ကို တိုးချဲ့နေတာဆိုတော့ ဥယျာဉ်ခြံမြေသမားတွေက ဒါတွေကို ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေ အကျေအလည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လက်ရှိမြေပြင် အနေအထားမှာ ကျွန်တော် သိထားသလောက်ဆိုရင် ဘာမှညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု မရှိဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ မြေယာပိုင်ရှင် ဖြစ်သူတွေနဲ့။ တောင်သူတွေက သူတို့မြေကိုသူတို့ ခြံစည်းရိုးခတ်တာကို အဲဒါဟာ လမ်းမကြီးပေါ် ကျူးတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲခံရတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ မြေပြင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရက သိရှိထားတာနဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီလို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ အားနည်းတာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာပြီးတော့ အမှုတွေလည်း တိုးလာတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကိုယ့်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်တာကို မူအားဖြင့်တော့ သဘောတူပါတယ်။ သို့သော် ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ ကျောက်မိုင်း ထုတ်လုပ်မယ့်နေရာနဲ့ နီးကပ်နေတဲ့ အောင်သပြေကျေးရွာအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့အတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူပြီး ဘယ်လိုတာဝန်ခံကြမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက် မေးမြန်းသွားရမှာပေါ့။ အားလုံးအတွက် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း ဦးစားပေးရမှာဖြစ်သလို နောက်တစ်ခုက စက်ရုံစီမံကိန်းနဲ့ ကျောက်မီးသွေးအန္တရာယ်နဲ့ အရမ်းနီးကပ်နေတဲ့ အောင်သပြေကျေးရွာ အတွက်ကိုလည်း နိုင်ငံတော်က အဆင့်ဆင့်သော အဖွဲ့အစည်းတွေက ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာပေါ့။ အခု မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ စက်ရုံစီမံကိန်းနဲ့ ဒေသခံတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ အကျေအလည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလောက်အထိ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အခုဟာက အဲဒီလို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ မရှိခဲ့တာကြောင့် အခုလိုတွေ ဖြစ်နေကြတာပေါ့” လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းဌေးလင်းက ထောက်ပြပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်နေတဲ့ တစ်နေ့ တန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်းက တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယတစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေသူများဟာ လူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီး ထောက်ခံထားသူ အများအပြားရှိကြောင်း၊ ကန့်ကွက်နေသည့် ဒေသခံများကို နောက်ကွယ်မှစေခိုင်းနေမှုများ ရှိနေတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
“မြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီဟာ MIC ခွင့်ပြုမိန့်ကျပြီးသား။ သူက ဒေသခံ ၅၀၀ ကျော်ကို အလုပ်အကိုင်တွေ ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြနေကြတယ်။ သူတို့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း ဘာမှမလုံလောက်ဘူး။ နောက်ကအဖွဲ့က မြှောက်ပေးနေလို့ ဖြစ်နေတာ။ ဒါဟာ အပွင့်လင်းဆုံး ကျွန်တော်ပြောတာ။ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ရလို့ ဒေသခံတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်တော့်ဆီကို စာတွေတင်ထားတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော် ဖြေရှင်းသွားရဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လိုပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စီမံကိန်းတွေကို အလွယ်တကူ မပေးပါဘူး။ နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်အခရရမယ်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အကုန်လုံးကို စစ်ဆေးစိစစ်ပြီးမှာသာ ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် MIC ကလည်း ခွင့်ပြုမိန့်ကျပြီးသား၊ ရွာသားတွေကလည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရနေပြီ။ ဒါကို လမ်းဖောက်တာ အကြောင်းပြုပြီး ကန့်ကွက်နေကြတာ။ စက်ရုံစီမံကိန်းကိုလည်း နယ်လုံဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း စစ်ပြီးသား။ သက်သေအထောက်အထားတွေလည်း ရှိပြီးသားပါ။
စီမံကိန်းကို လူ ၅၀၀၀ ကျော် ထောက်ခံထားတဲ့ လက်မှတ်တွေရှိ ပြီးသားပါ။ ကန့်ကွက်နေတဲ့သူတွေက ၅၀ တောင်မှ မပြည့်ပါဘူး။ ကန့်ကွက်နေတိုင်း မှန်တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ယူဆလား။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ခင်ဗျားတို့မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ နယ်မြေကွင်းဆင်ပြီး မေးပေးကြပါ။ ကန့်ကွက်နေသူတွေက မှန်သလားဆိုတာ။ နောက်တစ်ခုက MIC က ခွင့်ပြုပေးထားပြီးသားကို ကျွန်တော်တို့ အစိုးရက ကာကွယ်ပေးရပါတယ်” လို့ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တုံ့ပြန်ပြောကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းအတွက် လမ်းတိုးချဲ့မှုအပေါ် ကန့်ကွက်နေကြသည့် ဒေသခံတောင်သူများအား တွေ့ရစဉ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြားချက်အချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ ဒေသခံတွေက မြေပြင်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ ဒေသခံများကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ မြှောက်ပင့်ပေးနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ စက်ရုံစီမံကိန်းဟာ ကျေးရွာအနီးမှာ တည်ဆောက်နေတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်နေကြတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျေးလက်လမ်း ဖောက်လုပ်မှုမှာလည်း ဒေသခံများ ယာမြေတွေထဲက ယာမြေအချို့ လမ်းဖောက်လုပ်ရာမှာ ပါဝင်သွားတဲ့အတွက် နစ်နာမှုတွေရှိနေတဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု မရှိခဲ့တာကြောင့် ကန့်ကွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းဟာ အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်း ဆိုပေမဲ့ လက်ရှိအစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ အရင် အစိုးရလက်ထက်က ချထားပေးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းဟာ ပြည်သူကရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ လက်ရှိ အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက်မှာ လုပ်ငန်းတွေကို စတင်အကောင်အထည် ဖော်လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းကို ထောက်ခံထားသူ အများအပြား ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုထားပေမယ့် အသုံးပြုမယ့်လောင်စာ စွမ်းအင်က ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တည်ဆောက်နေတဲ့ စက်ရုံဟာ ဒေသခံရွာသားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာအနီးမှာ ကပ်လျက်တည်ဆောက်နေတာကြောင့် ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်နေတဲ့စက်ရုံဟာ လူနေထိုင်ရာကျေးရွာနဲ့ ခြံစည်းရိုးသာ ခြားနားနေတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ ညီ၊ မညီ ဆိုတာကို နှစ်ဖက်ရေရှည် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ထောက်ပြမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတို့ အကြားမှာ အငြင်းပွားမှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က စီမံကိန်း သွားရာလမ်းဖြစ်တဲ့ အောင်သပြေ-သရက်ကိုင်း ကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက ပေ ၅၀ အကျယ်တိုးချဲ့ခင်းရာမှာ ဒေသခံတွေက ကျိန်စာတိုက် ကန့်ကွက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို မြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စု ကုမ္ပဏီက လှူဒါန်းထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။
“တောင်သူတွေကတော့ ကိုယ့်ယာမြေအပေါ်မှာ လမ်းတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်တဲ့အပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိကြဘူး။ ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းကိုလည်း ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းရောက်လာမှ ကျွန်တော်တို့မှာ ရွာသားအချင်းချင်း၊ ဆွေမျိုးအချင်းချင်း၊ မိသားစုအချင်းချင်း စိတ်သဘောထားတွေ ကွဲကုန်ကြပါပြီ။ စီမံကိန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရွာအနားမှာ လာပြီးတည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ နေပြည်တော်ကို တိုင်ကြားထားတယ်” လို့ အောင်သပြေကျေးရွာက ဒေသခံတောင်သူ ဦးရွှေအုန်းက ဆိုပါတယ်။
စီမံကိန်းက ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြားခဲ့သလို နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ များစွာလိုအပ်တာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှိမှာသာ တိုင်းပြည်အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ ယေဘုယျကျတဲ့ အချက်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူ ၀င်ရောက်လာမယ့် စီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိက အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ လိုအပ်သလို အမှန်တကယ် အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ရက် တန်ချိန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းဟာ လူမှုစီးပွားဘ၀ ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိခိုက်နိုင်မှု မရှိတာ စတဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုအပ်ချက်နဲ့ ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့အတွက် ဆောင်ရွက်သင့်တာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဆိုပါ အချက်တွေနဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေမယ် ဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ အစိုးရတွေရဲ့ တာဝန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း အကောင်ထည် ဖော်သူတွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေသအပါအ၀င် နိုင်ငံအတွက်ပါ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ စီမံကိန်းဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရမယ့် အခြေအနေမှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged ကျောက်မီးသွေးLeaveaComment on တစ်နေ့ တန် ၅၀၀၀ ကျ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်းကို စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့သောက ဘယ်သူဖြေရှင်းပေးမှာလဲ
အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် သံခင်းတမန်ခင်းအခွင့်အလမ်း
Posted on October 14, 2018 by ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်း
၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က မွန်ဂိုလီးယားမြို့တော် အူလန်ဘာတော၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ-Youtube)
နိုင်ငံတကာထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ၊ ညီလာခံများ၊ ကွန်ဖရင့်များသည် သံခင်းတ မန်ခင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့် လွှမ်းခြုံနေသည့် စင်မြင့်များပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအကြီးအကဲများ အနေဖြင့် ထိုစင်မြင့်များမှတစ်ဆင့် မိမိနိုင်ငံ၏ မူဝါဒများ၊ လမ်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား ထိရောက်တွင်ကျယ်ရှင်းလင်း၊ ဆွေးနွေးနိုင်ရေး ရှေးရှုသင့်သည်။ ခေတ်ပြိုင် သံခင်းတမန်ခင်းတွင် မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များသည် အခွင့်အလမ်းများကို အမိအရဖမ်းဆုပ်လျက် စိန်ခေါ်မှုများ၊ အကျပ်အတည်းများ ကျော်လွှားနိုင်ရေး ဦးတည်ဖော်ဆောင်သင့်သည်။
(၁၂) ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ (အေဆမ်) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နှင့် ၁၉ ရက်တို့တွင် ဘယ်လ်ဂျီယန်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆယ်လ်မြို့၌ ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုများအတွက် ကမ္ဘာ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အေဆမ်သည် နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးမဏ္ဍိုင်၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး မဏ္ဍိုင်၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေး မဏ္ဍိုင်ဟူသည့် မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်အပေါ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အာရှနိုင်ငံများ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး အကျပ်အတည်းများနှင့် ပြဿနာများကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲပုံဖော်ပေးလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် အေဆမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွင် ဥရောပသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နယ်တက်စ်ခ် (Donald Tusk) သည် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အေဆမ်ခေါင်းဆောင်များသည် အာရှနှင့် ဥရောပလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား ဘုံအကျိုးစီးပွားစိန်ခေါ်ချက်များနှင့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးအမြင် ဖလှယ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ အေဆမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် အာရှတိုက်နှင့် ဥရောပတိုက်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဦးတည်သည့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးမျက်နှာစာလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ခြေလှမ်းစခဲ့သည့် အေဆမ်သည် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၁၂ ကြိမ်၊ ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး ၆၃ ကြိမ်၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး ၁၁၇ ကြိမ်၊ ဖိုရမ် ၃၉ ကြိမ်နှင့် အခမ်းအနား ၄၃၇ ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု လေ့လာမိသည်။
ဥရောပတိုက်နိုင်ငံ ၃၀ နှင့် အာရှတိုက် ၂၁ နိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သို့မဟုတ် အစိုးရအကြီးအကဲများသည် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ဘရပ်ဆယ်လ်မြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ အာရှနှင့်ဥရောပ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွား၊ ဘုံအခွင့်အလမ်းများကို ခေါင်းချင်းရိုက်ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။ အာရှနှင့်ဥရောပ ခေါင်းဆောင်များအကြား တစ်ထိုင်တည်း ရှင်းလင်း၊ ဆွေးနွေး၊ တိုင်ပင်မည့် အခွင့်အလမ်းကြီးဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ သုံးတတ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ သံခင်းတမန်ခင်းတွင် ဆေးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဘေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီး၊ ခပ်ဝေးဝေးနေသည်ထက် အကျပ်အတည်းများ၊ ဖိအားများကို အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ဗျူဟာမြောက် ပြောင်းပစ်နိုင်မည့်ဆေးအဖြစ် သုံးနိုင်ရေး ဦးတည်သင့်သည်။ မြန်မာအစိုးရ အကြီးအကဲများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးများတွင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး၍ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား ယုံကြည်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချဲ့ထွင်နိုင်ရေးသည် လတ်တလော စိန်ခေါ်မှုကြီးပင် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ဖိအားများ၊ ပိတ်ဆို့နိုင်ခြေများအကြား ပိတ်မိနေပြီး စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကျပ်အတည်းများ မြင့်မားနေဆဲကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သံခင်းတမန်ခင်းကို ဗျူဟာမြောက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး စဉ်းစားသင့်သည်။ လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အေဆမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ရခိုင် ပြည်နယ်အရေးအပါအ၀င် အရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘောထား ရှုမြင်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ လမ်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ စပ်ကူးမပ်ကူး၏ အကျပ်အတည်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အလားအလာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသည် အတန်အသင့် ထိရောက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အာရှခေါင်းဆောင်များကိုသာမက ဥရောပခေါင်းဆောင်များကိုပါ တစ်ထိုင်တည်း အသိပေး၊ ရှင်းလင်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကြီးဖြစ်သဖြင့် အမိအရဖမ်းဆုပ်လျက် ဘရပ်ဆယ်လ်သို့ ခြေဦးလှည့်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းဆော်သြလိုပါသည်။
လက်ငင်း မြန်မာ့အကျပ်အတည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ သံခင်းတမန်ခင်းချဲ့ထွင် နိုင်ရေးသည် ရှေ့တန်းရောက်လာနေသည်။ သံခင်းတမန်ခင်းခြေလှမ်းတိုင်းတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်တို့သည် ဒွန်တွဲနေမြဲဖြစ်သည်။ ဘရပ်ဆယ်လ်မှာ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် အကျပ်အတည်းများ၊ စိန်ခေါ်ချက်များ၊ ဖိအားများကို စိုးရိမ်ပြီး၊ ဘရပ်ဆယ်လ်ကို ရှောင်သည်ထက် ဗျူဟာမြောက်ပြင်ဆင်၍ စနစ်တကျချဉ်းကပ်နိုင်ရန် ပိုမိုသော့ချက်ကျမည်ဖြစ်သည်။ လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့နိုင်ရေး စဉ်းစား၊ သုံးသပ်သင့်ပြီး၊ အခွင့်အလမ်းကို ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် ဆင်ခြင်သဘောပေါက်မည်ဆိုလျှင် သံခင်းတမန်ခင်းခရီးပေါက်ဖို့ ခက်ခဲဦးမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှ-ဥရောပနိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အေဆမ်၏ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဘရပ်ဆယ်လ်တွင် ကျင်းပမည့် အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စပိန်တွင်ကျင်းပမည့် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်းအဝေးတို့ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ကူညီပံ့ပိုးလိုသည့် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ အူလန်ဘာတာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၁ ကြိမ်မြောက် အာရှ- ဥရောပ (အေဆမ်) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစဉ်အလာအရ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အနေဖြင့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ (အေဆမ်) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ရန် မကြာမီကာလအတောအတွင်း ဘယ်လ်ဂျီယန်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆယ်လ်မြို့သို့ သွားရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သည် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ စည်းဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၀ ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၊ အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေး၊ အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး စသည့် နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ၏ စကားပြောစင်မြင့်ကို မြန်မာအစိုးရ အကြီးအကဲများအနေဖြင့် အကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်ရေး အစီအစဉ်ဆွဲသင့်သည်။
(၁၂) ကြိမ်မြောက် အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့၏ အစိုးရအကြီးအကဲများလည်း တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အာရှတိုက်နှင့် ဥရောပတိုက်နိုင်ငံများ၏ အကြီးအကဲများအနေဖြင့် တစုတစည်းတည်း စိန်ခေါ်မှုများ၊ အကျပ်အတည်းများကို ဆွေးနွေး၊ အမြင်ဖလှယ်နိုင်မည့်အပြင်၊ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းသစ်များ၊ သံခင်းတမန်ခင်း အခွင့်အလမ်းသစ်များ၊ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာသစ်များနှင့် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ပက်ပင်းတိုးနိုင်မည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် မပျက် မကွက် တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့် မိသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဘရပ်ဆယ်လ်အေဆမ်ထိပ်သီးအစည်း အဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တက် ရောက်ပြီး မြန်မာ့အရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှီးနှောဖလှယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် ရခိုင်အရေးအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစိန်ခေါ်ချက်များအကြား ပိတ်မိနေဆဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ဖိအားများလျှော့ ချနိုင်ရေး၊ ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးတို့အတွက် အထိုက်အလျောက် ခရီးပေါက်နိုင်ခြေရှိပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted in FeaturesTagged အေဆမ်ထိပ်သီးLeaveaComment on အေဆမ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် သံခင်းတမန်ခင်းအခွင့်အလမ်း
Posted on October 14, 2018 October 15, 2018 by ပြည်သစ်ဟန်
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ မြ၀တီနယ်စပ်မှ ထွက်ခွာနေကြစဉ်
ဘ၀အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာ ဘာလဲညီလေး။ ကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်မိန်းမဆီ ဒီနေ့ အလည်သွားရမယ်။ အဲဒါပဲသိတယ်။ ဟာ…မင်းတို့က အတူတူနေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ မဟုတ်ဘူးလေ အစ်ကို။ ဒီလိုပဲ လကုန်ရင် ကျွန်တော်မိန်းမဆီပြန်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်ဆီ အလည်လာပါတယ်။ ဟ…မင်းတို့ဟာက လင်မယားချင်းတောင် အလည်သွားလာနေရတဲ့ ဘ၀ပါလား။ ဟုတ်တယ်အစ်ကို။ ကျွန်တော့်ဘ၀က ဘာမှအစီအစဉ် သိပ်မရှိဘူး။ အစီအစဉ်လို ပုံစံမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုပဲ အဆင်ပြေသလို နေနေတာပဲ။ ကောင်းပါ့ကွာ။
အဆင်ပြေသလိုဆိုတာ ပြောပါဦးညီ။ ဒီလိုလေ။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် အိမ်ထောင်စကျကတည်းက ရန်ကုန်မှာ နေခဲ့တယ်။ သူက ကျွန်တော်နေတဲ့နယ်မှာ ခဏလိုက်နေကြည့်သေးတယ်။ နေလို့မရဘူးတဲ့လေ။ အဲဒါကြောင့် အခု ရန်ကုန်မှာ နေနေရတာ။ ခက်တာက အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် ဆိုတာတော့ ထားပါဦး။ အခန်းလေးတစ်ခုတောင်ငှားနေဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ အေးကွာ စိတ်ထဲမကောင်းပါဘူး။ ဒါနဲ့ အခုကရော။
အခုက သူက သူ့အဒေါ်အိမ်မှာနေရင်း ဆေးရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်လေ။ သူ့အလုပ်က၀င်ငွေနဲ့ပဲ သူစားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းတယ်။ ပိုတဲ့အခါ စုမယ်ပေါ့။ အဲဒီ တော့ သူ့ဝင်ငွေက ပိုလျှံရဲ့လား။ အခုထိတော့ မပိုသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ မင်းကရော။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့လိုပဲ ပိုလျှံရင်စုမယ် စိတ်ကူးထားခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခန်းရေရှည်ငှားနေရလောက်အောင် မပိုလျှံခဲ့ပြန်ဘူး။ ဒါဆို နှစ်ယောက်ပေါင်းစုလို့ရတဲ့ ၀င်ငွေဆိုရင်ရော။ သူက စိုးရွံ့ပြုံးပြုံးလျက်။ တစ်စုံတစ်ရာကို မသေချာသေးတဲ့ အပြုံးဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆက်မေးဖို့ရာ ခက်နေတယ်။ သူက စကားပြန်ဆက်တယ်။
ကျွန်တော် အိမ်ထောင်မကျခင်က ဘန်ကောက်မှာ ၁၀ နှစ်လောက် အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံကတော့ အတော်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘန်ကောက်လည်း ဘန်ကောက်လို ပုံစံထဲမှာ ကျွန်တော် ရုန်းမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အိမ်ကိုလည်း ငွေပြန်မပို့နိုင်ခဲ့ဘူး။ အိမ်ဆိုတာက ကျွန်တော့်အတွက် ပုံစံကွဲတစ်မျိုးပဲ။ အ၀တ်အထည်တွေမှာဆိုရင် တံဆိပ်တူ အရောင်ကွဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အမေ မရှိတော့ဘူး။ အဖေက နောက်မိန်းမနဲ့ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဒေါ်နဲ့ နေခဲ့ရတာ။ အဒေါ်ရဲ့ အိမ်ပေါ့လေ။ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်ဒဿန။
ဆက်ပြောရရင် ဘန်ကောက်မှာက အလောင်းအစား အပျော်အပါး သိပ်ပေါတယ်။ ဖြစ်ချင်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ပျက်ချင်လည်း အလွယ်လေးပဲ။ ဒါနဲ့ ညီက ငွေမစု မိဘူးဆိုတာထားပါဦး။ လူကကော။ လူလည်း မပျက်တပျက်ပဲအစ်ကို။ ဟိုကောင့်ကို မေးကြည့်ပါလား။ ဘေးနားက ညီတစ်ယောက်ကို မေးငေါ့ပြတယ်။ သူကလည်း စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့။ သူက ပြောပြန်တယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး အိမ်ကနေထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဖြစ်ချင်ရာလည်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုပဲကြည့်လေ။ ကျွန်တော်တို့အကုန် ရယ်မောလိုက်ကြတယ်။
ညီကကော အခုဘာလုပ်နေလဲ။ မိန်းမနဲ့ပဲလား။ ကျွန်တော်က မိန်းမ မရှိပါဘူး။ ကမ်းနားမှာ ကုန်ထမ်းတယ်လေ။ ဟာ…မင်းရဲ့ ဗလနဲ့၊ ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကုန်ထမ်းတယ်လား။ ဟုတ်တယ်အစ်ကို။ သိတယ်မလား။ ဗလ ထက် ဇ လေ။ ကျွန်တော့်ဘ၀က ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲပေးနေတယ်လေ။ ကြည့်ပါလား။ အရင်ကထက် အများကြီး ကျွန်တော်အသားတွေ ကျစ်လျစ် လာတယ်မလား။ ဟိုညီက ထောက်ခံတယ်။ ဟုတ်တယ်အစ်ကို။ ဒီကောင်အရင်ထက် အများကြီးသန်မာလာတယ်။ ကျွန်တော် လက်နပန်းလှဲရင် အရင်က သူ့ကိုနိုင်တယ်။ အခု မနိုင်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ ကုန်ထမ်းရတာရော အဆင်ပြေရဲ့လား။ ဒီလိုပါပဲ အစ်ကိုရာ။ ဟ…အဲဒီ ဒီလိုပါပဲဆိုတာကြီးက သိပ်တော့မနိပ်ဘူးနော်။ ငါတို့တွေဟာ ဒီလိုပါပဲဆိုတာကြီးနဲ့ ဖြေသိမ့်နေကြတယ်လို့ မထင်မိဘူးလား မင်းတို့။ ဒါတော့ဒါပေါ့။ ဒါမှမပြောရင် ကျွန်တော် ဘာပြောရမလဲ။ မငတ်တငတ်လို့ ပြောရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ မနက်ဖြန်အလုပ်ထဲကျရင် ထမ်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရေထဲပစ်ချလိုက်ရမလား။ အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ညီရာ။ အကုန်လုံး ဘ၀တွေပါ ပြုတ်ကျ ကုန်လိမ့်မယ်။ ရှုး…တိုးတိုးပြော။ တို့ဘေးနံရံက အင်္ဂတေသားတွေ ကွာကျလာလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်မိန်းမလည်း ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုပါပဲလို့ ခဏခဏပြောတာပဲ။ ဒီကောင်လည်း တစ်ခါတလေ ကုန်ထမ်းတဲ့အလုပ်က ပြန်လာလို့ ကျွန်တော်မေးရင် ဒီလိုပဲပြောတတ်တာပဲ။ အစ်ကိုလည်း ပြောတာပဲမို့လား။ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်စလုံး အတော်ကြာအောင် ငြိမ်သက်သွားကြတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ဟာ ဒီလိုပါပဲဆိုတာကို ကျော်လို့မရသေးဘူးကွ။ ဒါကဘာ့ကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာတော့ မမေးပါနဲ့။ ဒါက ရန်ကုန် ညီတို့ရေ။ အစ်ကိုတို့ဟာ ဒီကအခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့ အရိပ်အခြေကြည့်နေကြရတာ။ ငါတို့ဟာ တစ်နေရာကနေ လွင့်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ လွင့်ချင်လို့လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘ၀ဟာဘာမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြဋ္ဌာန်းမထားရင် သိပ်ပေါ့ပါးတယ်လို့ ထင်စရာရှိတယ်။ အဲဒီလို ထင်စရာရှိတာကပဲ ငါတို့အတွက် သေချာပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားရသေးတယ် မဟုတ်လား။
ဒါနဲ့ ညီတို့။ ဟိုဘက်ထောင့်က ညီတစ်ယောက်ကကော မင်းတို့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူကကော အခုဘာတွေလုပ်နေလဲ။ အစ်ကို့လို ပြည်တွင်းဖြစ်ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် ညီတို့လို နိုင်ငံခြားပြန်လား။
သူက အစ်ကို့လိုပဲ ပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ့။ ကျွန်တော် မိန်းမ မရခင်က သူနဲ့အတော်လေး တွဲဖြစ်ခဲ့တယ်၊ နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘန်ကောက်ရောက်တော့ ဝေးသွားကြတယ်။ နောက်ဘန်ကောက်က ပြန်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော်က မိန်းမရရော။ အဲဒါနဲ့ တစ်နှစ်လောက် ပြန်ဝေးနေကြပြန်ရော အစ်ကို။ အခုမှ လာဆုံမိကြတာ။ဆုံမိကြတော့လည်း အကုန်လုံးဟာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ နဲ့ချည်းပဲ။ အမာရွတ်ကျန်တဲ့ဟာ ကျန်တယ်။ ပျောက်သွားတဲ့ဟာ ပျောက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုးလာတဲ့ ဒဏ်ရာအသစ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မတားနိုင်ဘူးလေ။ အစ်ကိုရော။
အစ်ကိုလည်း ဘာထူးမှာလဲ။ မင်းတို့က ဒဏ်ရာဆို၊ အစ်ကိုက အနာအဆာတွေနဲ့ ပေါ့ကွာ။ ဟား…ဟား…ဟား…ဟား…။ မင်းတို့ သူငယ်ချင်းအကြောင်း ပြောပါဦး။
ပြောမယ်အစ်ကို။ သူက ကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့လည်း မတူသလို ဟိုကောင်လိုလည်း ကုန်ထမ်းတာ မဟုတ်ဘူး။ သူက အဆိုတော်။ ညဘက် အဆိုတော်ပေါ့။ စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်တဲ့ ပရိသတ်ရှေ့မှာ သီဆိုနေရသလို သီဆိုနေမှန်းတောင် မသိတဲ့ ပရိသတ်ရှေ့မှာလည်း ဆိုနေရတဲ့သူပေါ့။ ဒါဆို သူ့အသံတွေ ကွဲအက်နေလည်း သတိမပြုမိတဲ့ ပရိသတ်လည်း ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ သိပြီ ညီ။ ကောင်းတယ် ညီတို့။ အစ်ကိုတော့ ဒီလိုပဲ ပြောတတ်တော့တယ်။
အစ်ကိုပြောတဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဆိုးတယ်လို့ပြောရင် အစ်ကိုတို့ အားလုံးဟာ အားပြတ်ပြီး လဲပြိုကျသွားနိုင်တယ်။ ဒေါက်တွေက မခိုင်ဘူးကွ။ ဒေါက်တွေကလည်း အစ်ကိုတို့ကို လဲကျမသွားအောင် ထောက်ထားတဲ့ ‘ဒီလိုပါပဲ’ ဆိုတဲ့ ရောင့်ရဲခြင်းတရား ဖြစ်နေလားလို့ပါ။ အစ်ကိုပြောတာလည်း မှားနိုင်တယ်နော် ညီတို့။ မှန်လည်း မှန်နိုင်တယ်။ တစ်ခါတလေ အမှား နဲ့ အမှန်ဟာ ထောင့်လေးတစ်ထောင့်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အရာတစ်ခုလိုပဲ။ အဲဒါဆို ညီတို့ ဘယ်လိုပြောမလဲ။
အစ်ကိုက သိပ်လေးနက်ပြနေလွန်းတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကုန်ထမ်းသမားဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သန်မာတယ်လို့ ယုံတယ်။ အဲဒါကြောင့် နံရံကို ဆောင့်တွန်းဖြို ပစ်လိုက်မှာပဲ။ ရှင်းရော။ ညီကရော။ ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးအရောင်းဆိုင်က ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ဈေးညှိကြည့်ရမှာပဲ။ ကိုက်ညီသလိုပေါ့။ ဒါဆိုရင် ညီတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဟိုအဆိုတော်ကရော ဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲ။ သူကတော့ အနားမရှိတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မပြောတတ်ဘူး။ အစ်ကိုရော သူဘာပြောမယ်ထင်လဲ။ အစ်ကိုလည်း မပြောတတ်ဘူး။ ဒါဆိုအစ်ကိုကရော။ အစ်ကိုကတော့ ပိတ်မိနေတဲ့ အဲဒီထောင့်လေးဆိုတာကို ဒီခေတ်မှာ မသိကိုမသိသေးတာ။
Posted in FeaturesTagged ထောင့်ကျဉ်းLeaveaComment on ထောင့်ကျဉ်း
Posted on October 12, 2018 October 12, 2018 by မောင်ကြည်
လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်နေရာတွင် ဈေးရောင်းနေသူအချို့အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇော်ဇော်အောင်)
ကန်ရေပြင်သည် စိမ်းလျက်ရှိသည်။ ကန်ရေပြင်၏ ပတ်ပတ်လည်မှာတော့ ကွန်ကရစ်ထိုင်ခုံကလေးတွေ အစီအရီ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သည် အရိပ်ကောင်းလှသည့် ကုက္ကိုပင်ကြီးနံဘေးမှာရှိသည့် ထိုင်ခုံတစ်ခုပေါ်မှာ ထိုင်နေကြပါသည်။ မနက်ခင်း လေပြေသည် ကန်ရေပြင်ကိုဖြတ်ကာ ကျွန်တော်ထံပါးသို့ ရောက်လာတတ်သည်။ နေထွက်ပြူကာစဖြစ်သောကြောင့် နေမပူလှသေး။ နေရောင် မစူးလှသေး။ ထိုင်လို့ကောင်း စကားပြောလို့ကောင်းလှသည်။
ကျွန်တော်နှင့် သူမသည် ကန်ရေပြင် စိမ်းစိမ်းကိုငေးရင်း စကားတပြောပြောနှင့် ထိုင်နေကြသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ထိုင်ခုံများမှာလည်း အပန်းဖြေနားနေသူအချို့ကို တွေ့ရသည်။ ကလေးအချို့လည်း ပြေးလွှားခုန်ပေါက် ကစားနေကြလေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကုက္ကိုရွက်ကလေးတွေ ဝေ့၀ဲလွင့်ကျလာတတ်သည်။ မနက်ခင်းလေပြည်သည် သနပ်ခါးနံ့လေးတွေ ရောနှောပေါင်းစပ်ကာ မွှေးပျံ့သင်းထုံနေလေသည်။ ကန်ရေပြင်ထဲသို့ ထိုးဆင်းကျလာသည့် နေရောင်ခြည်ထဲမှာ သနပ်ခါးမှုန်ကလေးတွေ လွင့်ပျံနေသလား ထင်မှတ်မှားမိသည်။ လှုပ်ရှားရုန်းကန် ဆူညံနေသော ကမ္ဘာကြီးသည် ခဏတာ တိတ်ဆိတ်သွားသည်ဟု ထင်မိသည်။ ကျယ်လောင်ဆူပွက်နေသည့် စကားပြောသံများ တဖြည်းဖြည်း တိုးတိတ်သွားကြသည်။ လှုပ်ရှားနေသည့် မြင်ကွင်းများ တစ်စတစ်စ ငြိမ်သက်သွားကြသည်။ မျက်တောင်တစ်ခတ် ပင့်သက်တစ်ရှိုက်မှာ ဖိုလှိုက်နေသော ရင်သည် တသိမ့်သိမ့် ခါလျက်ရှိသည်။ ထိုစဉ်အချိန်မှာပင် အသံတစ်သံ ထွက်ပေါ်လာသည်။
‘သားကို မုန့်ဖိုးလေး နည်းနည်းလောက်’
လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ငါးနှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်။ နေလောင်ထားသည့် အသားအရေ။ ခပ်နွမ်းနွမ်းအင်္ကျီကလေးနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ လက်က လေးတစ်ဖက်ဖြန့်လျက်။ အရောင်မှိန်ဖျော့နေသည့် မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးက ကျွန်တော်တို့ကို ငေးကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ထိုင်နေသော သူမသည် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ကာ တစ်ရာတန်တစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုကောင်လေး လှည့်ထွက်သွားသည်။
ကန်ရေပြင်သည် နေရောင်စူးစူးအောက်မှာ အစိမ်းရောင်ဝင်းလက် တောက်ပနေသည်။ ဖြတ်သန်းလာသည့်လေကြောင့် ရေ ရေလှိုင်းအတွန့်လေးတွေ ယှက်ဖြာနေကြသည်။ ကုက္ကိုပင် အကိုင်းအခက်တွေကြားမှ ထိုးဆင်းလာသော နေရောင်က ကျွန်တော်တို့ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ခုန်တက်လာသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ကလေးတစ်သိုက်ထံမှ ရယ်သံသဲ့သဲ့ပျံ့လွင့်လာသည်။ ကျွန်တော့်ပခုံးကို မှီထားသည့် သူမခေါင်းမှ ဆံနွယ်မျှင်ကလေးများ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ပွတ်သပ်ကျီစယ် နေကြလေသည်။ ကမ္ဘာလောကကြီးသည် ဆူညံနေရာမှ တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။ မပီဝိုးတ၀ါး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား။ ခြေသံတွေ နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက်။ စကားပြောသံတွေ တိုးလာလိုက် ကျယ်လာလိုက်။ မှောင်လိုက် လင်းလိုက်။ လင်းလိုက် မှောင်လိုက်။ အမှောင် . . . အလင်း။ အလင်း . . . အမှောင်။
ကျွန်တော်တို့ ရှေ့သို့ပုံရိပ်တစ်ခု ရောက်လာသည်။ ကလေးချီထားသည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ ကလေးက နှာရည်တရှုံ့ရှုံ့။ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပေပွနေသည့် ဂျစ်တူးရုပ်လေးနှင့်။ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လိုက် သူမကိုကြည့်လိုက်နှင့်။ စကားပြောဖို့ အားယူနေသည့် ကောင်မလေးကို ကြည့်ရသည်မှာ ရှိုက်ရှိုက်ပြီး ငိုတော့မလို ထင်ရသည်။ ကျွန်တော်နှင့် သူမတစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်မိကြသည်။ ရုတ်တရက် ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသည်။ ရှိုက်ရှိုက်ပြီး အားယူနေသော နှုတ်ခမ်းလေးထဲမှ စကားလုံးအချို့ ပွင့်အန်ထွက်လာကြသည်။
‘ထ … ထမင်း စားစရာမရှိလို့ပါရှင်’
ကျွန်တော်သည် ပိုက်ဆံအိတ်လေးဖွင့်ကာ နှစ်ရာတန်တစ်ရွက်ထုတ်ပြီး ကောင်မလေးကို လှမ်းပေးလိုက်သည်။ နှစ်ရာတန်ကို လှမ်းယူရင်း လှည့်ထွက်သွားသည့် ကောင်မလေး၏ နောက်ကျောကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဖိနပ်မပါသည့် ခြေဗလာနှစ်ဖက်ဖြင့် တရွေ့ရွေ့ကျောခိုင်းသွားသော ပုံရိပ်လေးပျောက်သွားသည်အထိ ကျွန်တော်တို့ စကားမပြောမိကြချေ။ သူ့ထံမှ သက်ပြင်းချသံ သဲ့သဲ့ကြားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်သည် အုတ်ခုံနောက်ဘက်ကို ကျောမှီရင်း ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိသည်။ တဖြည်းဖြည်းတက်လာသည့် နေရောင်ကြောင့် ကောင်းကင်သည် လင်းချင်းဝင်းပနေသည်။ တိမ်မရှိသည့် ပကတိအပြာရောင်ကောင်းကင်။ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်ရသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းလှပါသည်။ ထိုကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ လူသားတွေကရော…။
“ဟင် . . . ဟိုမှာ ကြည့်ပါပြီး’
ဗြုန်းခနဲ ထအော်လိုက်သည့် သူမစကားသံကြောင့် ကျွန်တော့်အတွေးစတွေ ပြတ်သွားသည်။ သူမလက်ညှိုးညွှန်ပြရာသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ကန်ရေပြင်မှာ ဘောက်တူ လှေကလေးတစ်စင်း။ လှေပေါ်မှာ ငါးအသေတွေ စုပုံထပ်ထားသည်။
‘ကန်ထဲက ငါးအသေတွေ လိုက်ဆယ်နေတာဖြစ်မယ်’
ကျွန်တော်က မှန်းဆပြောလိုက်မိသည်။ လှေသမားက သူ့လက်ထဲမှာပါသည့် ပိုက်ခွက်ကလေးနှင့် ရေပေါ်ဗောလောပေါ်နေသည့် ငါးအသေတစ်ကောင်ကို လှမ်းခပ်ယူလိုက်သည်။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက သေနေသော ငါးမှန်းမသိ။ ငါးသေကို ဆယ်ယူပြီးနောက် လေထဲမှာ ငါးညှီနံ့လိုလို ငါးပုပ်နံ့လိုလို အနံ့အချို့ရောနှော ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာသည်။ ကျွန်တော်နှင့်သူမ နှာခေါင်းကို ပြိုင်တူရှုံ့လိုက်မိကြသည်။ သနပ်ခါးနံ့သင်းပျံ့ပျံ့လေး ဘယ်ဆီသို့ ထွက်ပြေးသွားပြီ မသိတော့ချေ။ သူမကို လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ သူမက ပခုံးတွန့်ပြသည်။ ကျွန်တော်က သဘောကျသလို ပြုံးလိုက်မိရင်း နောက်ဘက်သို့ ကျောမှီကာ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်လိုက်ပါသည်။ အပြာရောင်ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်ရသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းအေးမြ သာယာလှပါသည်။ ထိုကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ အဖြစ်အပျက်တွေကရော…။
နေရောင်သည် ကုက္ကိုပင်ကြီးကိုကျော်ကာ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်ခုံလေးပေါ်သို့ ဖြာကျဆင်းလာပါသည်။ ကျွန်တော်သည် လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှ NIKKO ထီးခရမ်းရောင်လေးကို ဆွဲထုတ်ကာ ဖွင့်လိုက်သည်။ ထီးရိပ်အောက်မှာ လူသားနှစ်ယောက်။ နေပူဒဏ်ကို ခုခံကာကွယ်နေသည့် လူသားနှစ်ယောက်။ ထီးလေးကို အောက်ဘက်သို့ နည်းနည်းဆွဲနှိမ့်လိုက်သောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမြင်ရတော့။ ထီးအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တည်း။ ဆူညံနေသော ကမ္ဘာလောကကြီးသည် ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။ ကန်ရေပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာသော လေထဲမှာ ငါးညှီနံ့တွေ ပါမလာတော့။ သင်းပျံ့ပျံ့ သနပ်ခါးနံ့လေး ဝေ့၀ဲရောက်ရှိလာပြန်သည်။ မျက်တောင်တစ်ခတ် ပင့်သက်အရှူမှာ လှိုက်ဖိုနေသောရင်သည် တသိမ့်သိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့်။ ကန်ရေပြင် စိမ်းလဲ့လဲ့မှာ ရေလှိုင်းတွန့်လေးတွေ ယှက်ဖြာသွယ်တန်းလျက် …။
ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲလိုက်သလို ထွက်ပေါ်လာသည့် အသံကြောင့် နှစ်ယောက်သား အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်မိသည်။ ဘုရားရေ … လာပြန်ပြီလား နောက်တစ်ယောက်။ သည်တစ်ခါတော့ နည်းနည်းအသက်ကြီးကြီး ကောင်လေးတစ်ယောက်။ သူ့မျက်နှာက ခပ်တည်တည်။ အကြောက် အလန့်မရှိ။ အသနားခံသည့် အမူအရာမပေါ်။ ရှေ့မှာလာရပ်နေသည့် သူ့ကို ပြန်စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ သူကတံတွေးကို တစ်ချက်မျိုချလိုက်သည်။ ပြီးမှ
‘ကျွန်တော့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဟောဟိုက ကလေးလေးတစ်ယောက် အတွက်ပါဗျာ’
သူပိုက်ဆံတောင်းပုံက တစ်မျိုး။ ပြောပုံကလည်း နောက်သလိုလို အတည်လိုလို။
‘အေးကွာ အစ်ကိုတို့မှာလည်း လမ်းစရိတ်ပဲ ကျန်တော့တယ်ကွနော်’
သည်တစ်ခါ အသနားခံရသူက ကျွန်တော်များ ဖြစ်နေမည်လားမသိ။ သို့သော် ထိုကောင်လေးက ထွက်မသွားသေး။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာ ရပ်မြဲရပ်နေသည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့။ ပိုက်ဆံအိတ်လေးဖွင့်ကာ ငါးရာတန်တစ်ရွက် ကမ်းပေးလိုက်ရသည်။ ထိုကောင်လေးက ထူးထူးခြားခြား ၀မ်းသာဟန်မပြဘဲ လှမ်းယူသည်။ လှည့်ထွက်ခါနီး ကျွန်တော်တို့ကို ပြောဖြစ်အောင် ပြောသွားချေသေးသည်။
‘အစ်ကိုကြီးကို ကျွန်တော် မှတ်သားပါ့မယ်။ တကယ်ပါဗျာ။ ဟောဟိုက ကောင်လေး မုန့်စားချင်လို့ ကျွန်တော်က တောင်းပေးရတာဗျာ’ ..တဲ့။
ကျွန်တော်နှင့်သူမသည် ရယ်ရအခက် ငိုရအခက်နှင့် သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေမိသည်။ ထိုကောင်လေးထွက်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ တော်တော်နှင့် စကားမပြောဖြစ်ကြ။ ရှေ့မှာ မြင်နေရသည့် ကန်ရေပြင်ကိုသာ နှစ်ဦးသား ငေးကြည့်နေမိကြသည်။ ကန်ရေပြင်သည် စိမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကောင်းကင်ကြီးကလည်း ပြာလျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည့် လူသားတွေ၏ ဘ၀တွေကရော ရေပြင်ကဲ့သို့ စိမ်းလန်းပြီး ကောင်းကင်ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းပါရဲ့လား…။
ထိုစဉ် ကုက္ကိုရွက်တွေ လေနှင့်အတူ တဖွဲဖွဲကျလာကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှ အသီးသီး မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ကြသည်။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီ မဟုတ်ပါလား။ ။
Posted in FeaturesTagged ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာLeaveaComment on ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ
လူမှုကွန်ရက်အကောင့်များ ခိုးယူခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်မှုတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ
Posted on October 7, 2018 October 8, 2018 by ဥာဏ်ဝင်းရှိန်
အကောင့်များ ခိုးယူ၍ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ကာ ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်မှု ဖြစ်စဉ်အချို့ကို တွေ့ရစဉ်
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်သည်းလာတာနဲ့အညီ နည်းပညာကိုအလွဲသုံးပြီး ဖြတ်လမ်းက ငွေရှာတဲ့သူတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ သူတို့ဟာ နည်းပညာပိုင်းမှာ သာမန်လူတွေထက် ပိုသိတဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Facebook မှာ လူသိများတဲ့ အကောင့်တွေ၊ ဖော်လိုဝါများတဲ့ အကောင့်တွေနဲ့ ငွေကြေးတတ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့အကောင့်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး Recovery ဆွဲပြီး လျှို့ဝှက်ကုတ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပြီး ထိန်းချုပ်လိုက်ကာ ထိန်းချုပ်ခံရတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေဆီကနေ ငွေကျပ်အနည်းဆုံး သောင်းဂဏန်းကနေ သိန်းဆယ်နဲ့ချီ တောင်းခံပြီး ငွေညှစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ ငွေညှစ်ခံရမှုတွေက ပိုဖြစ်ပွားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတာက တည်ဆဲဥပဒေအရ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ငွေတောင်းခံနေကြတာ တွေ တွေ့နေရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ လူငယ်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်သလို MTV ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ဦးရဲ့အကောင့်ကို မသမာတဲ့သူတွေက Recovery ဆွဲပြီး လျှို့ဝှက်ကုတ်တွေ၊ လုံခြုံရေး အချက်အလက်တွေကို ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ Page တွကိုပါ ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အကောင့်ကိုခိုးယူခံရတဲ့ မိတ်ဆွေက ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာတော့ ငွေကျပ် နှစ်သိန်းပေးဖို့အတွက် ခိုးယူထားတဲ့ လူငယ်တွေက တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီကြောင့်အကောင့်ကို ခိုးယူထားတဲ့သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို ရရှိထားတဲ့အတွက် ရဲတိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ခိုးယူထားတဲ့အကောင့် အကုန် ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အလားတူပဲ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အကောင့်ကိုလည်း အဆိုပါလူငယ်အဖွဲ့ကပဲ ခိုးယူပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အဲဒီအဖွဲ့ထဲကလူ ငယ်တစ်ဦးက တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အကောင့်ကို ပြန်ယူပေးမယ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်လာပြီး အကောင့်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့ရအောင် အီးမေးလ်နဲ့ လျှို့ဝှက်ကုတ်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကောင့်ကိုခိုးယူခံရတဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း ကျေးဇူးတင်တဲ့ အတွက် ဥာဏ်ပူဇော်ခအဖြစ် ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ ကို Wave Money ကနေ လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေလွှဲပေးခဲ့ပြီးတဲ့ညမှာပဲ အကောင့်ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အကြိမ်ကြိမ် ငွေတောင်းလို့ရအောင် စနစ်တကျကြံစည်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်အကောင့်ကို ခိုးခံရတော့ ပြန်လိုချင်တာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဟက်ကာဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးက သူပြန်ယူပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥာဏ်ပူဇော်ခတော့ ပေးရမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ သဘောတူလိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အီးမေးလ်၊ လျှို့ဝှက်ကုတ် ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုံခြုံရေးခံထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ၀င်ရင်သူ့ဆီက ကုတ်တောင်းရတယ်။ လောလောဆယ် အီးမေးလ် အစကျန်တာ ဘာမှမပြောင်းနဲ့ဦးဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော် သူပြောတဲ့ အတိုင်း ယုံပြီး ငွေ ၅၀၀၀၀ ကို မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို လွှဲခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့ ရောက်တော့ ဖွင့်ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ ဒါမလိမ့်တပတ်နဲ့ ကျွန်တော့် ငွေကို လိမ်သွားတာ” လို့ အကောင့် ခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရန်မိုးက ဆိုပါတယ်။
အလားတူပဲ Facebook Page ကို ခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးကလည်း “Facebook က လူတော်တော်သိတဲ့အတွက် ခိုးယူသွားတဲ့ သူတွေကို ဆက်သွယ်တော့ ငွေကျပ်နှစ်သိန်း လွှဲခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က မပေးနိုင်ဘူး။ မကျေနပ်ရင် ဖျက်ချင်ဖျက်လို့ ပြန်ပြောတော့ ၅၀၀၀၀ ပဲ ပေးဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ငွေ မပေးပါဘူး။ ဒီအဖွဲ့မှာပါတဲ့ လူငယ်တွေ ဘယ်သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာတွေက အစ နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အစ်ကိုတစ်ဦးက စုံစမ်းသိထားတဲ့အတွက် ရဲတိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတုန်း သူတို့ ပြန်ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ စနောက်တဲ့အနေနဲ့ ခိုးယူမိပါတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းဆက် ပြန်တောင်းပန်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို မလုပ်တော့ပေမဲ့ နောက်တစ်ဦးဦးကို ထပ်လုပ်နေဦးမယ်လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး နည်းပညာကို အလွဲသုံးပြီး အကောင့်တွေခိုးယူ၊ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းတဲ့သူတွေဟာ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေကို ပစ်မှတ်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အများအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းလို့လွယ်တဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ အကောင့်ကို ခိုးယူခံရပြီး ငွေကျပ် နှစ်သိန်းတောင်းခံတာ ခံနေရသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မသီတာက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကျွန်မအကောင့်က မနက်က ၀င်လို့ရတယ်။ ညနေရောက်တော့ ၀င်လို့မရတော့ဘူး။ အီးမေးလ်ရော လျှို့ဝှက်ကုတ်ရော မှားနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ တခြားအကောင့်ကနေသွားပြီး ဆက်သွယ်တော့ အကောင့်ယူထားတဲ့သူက အစ်မအကောင့်ကို လုံခြုံရေးမြှင့်ပေးတာပါ။ တခြား ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ အကောင့်ကိုပြန်လိုချင်ရင် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းပေးရမယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်မက မရှိလို့ပါမောင်လေးရယ် ခဏတော့စောင့်ပါလို့ ပြောထားတယ်။ ကျွန်မအကောင့်က ဖော်လိုဝါ နှစ်သိန်းကျော်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ပိုက်ဆံမပေးချင်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ရဲစခန်းသွားတိုင်တော့ ရဲကလည်း သူတို့အနေနဲ့ နည်းပညာပိုင်း မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက် ဒါကို ချက်ချင်းအ ရေးယူဖို့ မလွယ်ဘူး။ တကယ်လို့ အစ်မဖွင့်ချင်ရင်တော့ ရတယ်။ ဖမ်းဖို့ဆိုတာကတော့ ခက်တယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေက အားကိုးတကြီး လာတိုင်တာ ဒါပေမဲ့ အကောင့်ကိုခိုးပြီး ငွေတောင်းတဲ့သူ တွေကိုဖမ်းဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာကတော့ အရမ်းပေါ့လွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်” လို့ သူမရဲ့ အခက်အခဲကို ပြောပြပါတယ်။
အွန်လိုင်းကနေ အကောင့်တွေကိုခိုးယူပြီး ငွေခြိမ်းခြောက် တောင်းခံနေတာဟာတည်ဆဲဥပဒေ ဖြစ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)မှာ ‘ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ မတရားတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ခြိမ်းခြောက်ခြင်း’ တို့ကို ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပါက သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို အများဆုံး အသုံးပြုပြီး အမှုဖွင့်တာကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ အသရေဖျက် ရေးသားမှုတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး အကောင့်တွေ ကိုခိုးယူပြီး ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းတဲ့အတွက် အမှုဖွင့်တာက မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ အကောင့်ကို ခိုးယူခံရတဲ့သူတွေက ငွေပေးလိုက်ကြတာများတဲ့အတွက်လည်း ဒီလို အကောင့်ခိုးယူတဲ့သူတွေက ဂရုမစိုက်ဘဲ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ပုံစံ Wave Money ကနေတစ်ဆင့် ငွေလွှဲခိုင်းနေကြတာပါ။
“သူတို့ပဲခိုး သူတို့ပဲ ပြန်ဆယ်လုပ်နေကြတာပါ။ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းလို့မရရင် တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ပြန်ဆယ်ပေးမယ် ဥာဏ်ပူဇော်ခပေး ဆိုပြီး သူတို့အဖွဲ့ထဲက လူတစ်ယောက်က လာပြောလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးကို ဒီကောင်တွေအဖွဲ့က စီးပွားဖြစ် လုပ်စားနေတာပါ။ အဓိကပစ်မှတ်ကတော့ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေ၊ လူသိထင်ရှားတဲ့သူတွေ၊ အနုပညာရှင်အကောင့်တွေ စတာတွေ များပါတယ်။ တကယ်လို့ အကောင့်ကိုခိုးယူခံရပြီး ငွေတောင်းရင် မပေးပါနဲ့။ ရဲသာသွားတိုင်ပြီး အမှုဖွင့်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ပေးတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက် အတင့်ရဲလာတာပါ။ ဆိုက်ဘာရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်း ဒီလိုမျိုးလူတွေကို ဖမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” လို့ အမည်မဖော်လိုသူ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မိမိလူမှုကွန်ရက်ကို အခိုးမခံရအောင် လုံခြုံရေးမြှင့်လို့ရပါတယ်။မိမိအကောင့်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Mail & Mail Password သေချာမှတ်ထားပါ။ Birthday ကို အများသိအောင်မထားဘဲ Only Me ထားပါ။ (Two-Factor Authentication On) ထားပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ (3 to5Fri Tpfrusted Contacts ) ငါးဦးအပြည့် ထည့်ထားပါ။ ငါးဦး အပြည့်ထည့်ထားတဲ့အခါ အကောင့်ကိုခိုးယူမယ့်သူတွေအနေနဲ့ Recovery လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်း အကောင့်တွေခိုးပြီး ငွေ တောင်းခံတာကို အုပ်စုလိုက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်လို့ လူမှု ကွန်ရက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစိုင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူခံရတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နေနေတာကို လာပြီး ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းတာကတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကိုအမြန်ဆုံး ထောင်ထဲ ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုက်ဘာ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးအကောင့်တွေ လိုက်ခိုးပြီး ငွေတောင်းတဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးသင့်နေပါပြီ။ သူတို့ကို လိုက်ဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့က ငွေလွှဲရထုတ်ရ လွယ်ပြီး မှတ်ပုံတင်မလိုတဲ့ ငွေလွှဲစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေလွှဲခိုင်းတာ များပါတယ်။ ဥပမာ- Wave Money လိုငွေလွှဲစနစ်ပေါ့။ မန္တလေးမှာ ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ငွေထုတ်တဲ့ဆိုင်ကနေ ခြေရာခံပြီး ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ဖမ်းရင် တကယ်မိပါတယ်” လို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
Posted in Features, HeadlineTagged FacebookLeaveaComment on လူမှုကွန်ရက်အကောင့်များ ခိုးယူခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်မှုတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ